ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေသော နေရာမှာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ………. အတွင်းဖြစ်ကာ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးမြူ နေထိုင်လျှက်ရှိသော ဆရာကြီးအမည်ခံ ဦးတိုးဆိုသော လူဝကြီးအိမ်တွင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်နှင့် ဆက်သွယ်သိရခြင်းမှာလည်း ထူးဆန်းလှသည်တော့ မဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော် လူသတ်မှုဖြင့် ထောင်တွင်းကိုရောက်စဉ်က ဦးတိုးနှင့် သိကျွမ်းခဲ့ရပြီး သူ့ကို ထောင်အကျဉ်းသားတစ်ဦးက ရိုက်နှက်ရန်ကြံစည်ရာမှ ကျွန်တော်က ၀င်ရောက်ကယ်ခံရလေသောကြောင့် ဦးတိုးမှာ အသက်ချမ်းသာရာရသွားပြီးနောက် ခင်မင်ရင်နှီးသွားခြင်းဖြစ်၏။ ထိုအချိန်က ဦးတိုး၏အမှုမှာ မကောင်းသောမိန်းမများနှင့် စီးပွားရှာဖွေလုပ်ကိုင် ဖာထောင်စားမှုအတွက် ထောင်၁နှစ်ခွဲကျလာရာမှ ကျွန်တော်နှင့်ခင်ပြီး ထိုခေတ်တွင် တွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက်တွက် ကျွန်တော်သည် ထောင်ထဲတွင် နှစ်ရှည်လများ မခံစားရပဲ ဂျပန်ခေတ်မှ ဖြစ်ခဲ့ရသောအမှုဖြစ်၍ ဦးတိုးထက်အရင် ထိုအမှုမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ရပါသည်။
ကျနော်ဘာကြောင့် လူသတ်ခဲ့ရသလဲဆိုတာကို ရှေ့အခန်းတွင် ဖြော်ပပါမည်။ ကျနော်အစက လူတစ်ယောက်အဖြစ် လူသားတို့ စောင့်ဆည်းအပ်သော ကျင့်ဝတ်သိက္ခာကို စောင့်ဆည်းလင့်ကစား ကျနော့်ကို ဖောက်ပြန်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သူမှာ မိန်းမသားသည်ပင်ဖြစ်၏။ အမှန်ကတော့ ကျနော်သည် လူကောင်းတစ်ဦးမဟုတ်ပါ။
လူကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်ကနေ လူဆိုးတစ်ဦးအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ရခြင်း အခြေအနေကို ပေးလိုက်သူမှာ မသတ္တ၀ါခေါ် တဏှာတို့ကြောင့်ဖြစ်လေသည်။ ကျနော်ဘယ်အထိများ အာရုံဝင်စားနေမှန်းမသိပါ။ ဦးတိုးက ကျနော့်အနီးကပ်ခါ-
‘ကဲ..စိုးလေး.. မင်းလုပ်ရမဲ့တာဝန်က ဒီအခန်းထဲက ငနဲမပဲ.. ကောင်မက အခုထိ စိမ်းနေသေးတယ်.. အေးလေ ခေါင်းမာနေသေးတယ်ဆိုပါတော့ … အဲဒါ.. ဟဲဟဲဟဲ.. ကြည့်လုပ်စမ်းပါအုံး’
ဦးတိုးပြလိုက်သော အခန်းတွင်းကို ကြည့်လိုက်သောအခါ အသက်၁၈နှစ်ခန့်ရှိမည်ဟုထင်ရသော မိန်းမပျိုတစ်ဦး ငိုကြွေးလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ကျနော်ဟာ ခပ်စောစောကလို မဟုတ်တော့ဘဲ ခေါင်းမှဆံပင်ကို ကျကျနနဖီးကာ အ၀တ်အစားများ သပ်သပ်ယပ်ယပ်ဝတ်ဆင်၍ ကောင်မလေးရှိသည့် အခန်းထဲသို့ ၀င်သွားပါသည်။ ကောင်မလေးဆိုသော်လည်း အပျိုကြီးဖားဖား တင်ကားရင်သားများက စိတ်နှလုံးကို ပြုံးပြုံးထလာအောင် စွင့်ကာဖွံ့ထွားလျက် တွေ့ရပါသည်။
ကျွိ ကနဲမြည်သံကြောင့် တဖက်သို့ ဒူးခေါင်းကလေးနှစ်လုံးထောင်ကာ မျက်လုံးကလေးမှေး၍ ခေါင်းကလေးမှာ ဒူးခေါင်းထိပ်ပေါ်ငိုက်ကျယင်းက မျက်ရည်များပါးပေါ်သို့ တလှိမ့်လှိမ့်စီးဆင်းကျနေပြီး အလှမယ်လေးက ဆတ်ကနဲ ခေါင်းထောင်ကာ ကြည့်လိုက်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
သူကလေးမှာ ကျနော့်ကိုမြင်သောအခါတွင် ရုတ်တရက်ခေါင်းထောင်ကြည့်ပြီး အံ့အားသင့်နေပုံလည်းရပြီး၊ ကျနော်က ပြုံးချိုသောမျက်နှာကို အစွမ်းကုန် ဟန်ဆောင်ထားကာ-
‘နာမည်ကလေးက ဘယ်လိုခေါ်သလဲ၊ အစ်ကို ပဲခူးကပဲ- ဒီကအမကြီးက အကို့ကို မိန်းမပေးစားမယ်ဆိုပြီး ခေါ်လာတာပဲ-
သူကမင်းကို သနားပြီး မင်းကိုခေါ်လာတဲ့လူတွေကျေနပ်အောင် နေပေးပါဆိုလို့ ပေးခဲ့ရတာပဲ.. ဒီတော့ မင်းဘာမှမပူနဲ့ ဟုတ်လား- မင်းကို ငါတတ်နိုင်သလောက် ကယ်တင်ပါ့မယ်ကွယ်’
ကျနော်က ထိုကဲ့သို့ ညှင်ညှင်သာသာပြောလိုက်သောကြောင့် သူကလေးမှာ အတော်ယုံစာသွားဟန်ရှိပြီး ဗြုံးကနဲ ကျနော့်ခြေသလုံးကိုဖက်၍ တရှိုက်ရှိုက် ငိုပါလေတော့သည်။
‘အကိုကြီးရယ် ကယ်ပါ- ကျမကို မတရား ဒီလူတွေခေါ်လာပြီး၊ မယားကျင့်ဖို့ ကြိုးစာတယ် အကိုကြီးရယ်- အကိုကြီး ကယ်ပါနော်--- အကိုကြီးကို အားကိုးပါရစေရှင်’
‘တိုးတိုး ကွဲ့.. တိုးတိုး.. မင်းမှာလဲ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပါလား’
‘ဟုတ်ပါတယ်အစ်ကိုကြီးရယ်.. မတရားကျင့်ဘို့ကြိုးစားတာ မရတာနဲ့ ကျမကို အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်တယ်- ကျမသေပါစေ မခံဘူး’
‘အစ်ကိုကလည်း ဒီလိုသတ္တိမျိုးကိုမှ ကြိုက်တာ- ဒါပေမဲ့ ညီမလေးနဲ့ အကိုကြီးတကယ် ချစ်ကြိုက်သွားကြောင်းကို သူတို့မြင်အောင်ပြမှဖြစ်မယ်- သူတို့က တစေ့တစောင်း ချောင်းကြည့်နေတာ- ဒါမှလဲ ညီမလေးကို ကယ်တင်နိုင်မှာ’
‘ဟင်’ သူကလေးမှာ အတော်လေး ရှက်သွားဟန်ဖြင့် ခေါင်းငုံ့ပစ်လိုက်ပါသည်။ သူကလေး၏ရင်မှာ နိမ့်တုံမြင့်တုံ ဖြစ်နေပါသည်။
‘မူမူလို့ အတိုကောက်ခေါ်ပါတယ်- နာမည်အရှည်ကတော့ လေးမူလို့ ခေါ်ပါတယ်’
‘အကိုကြီးကတော့ မူမူ့ကို မြင်မြင်ချင်းပဲ ချစ်နေပြီ- အကိုကြီး မူမူ့ကို ငွေနဲ့ပေါက်ပြီး ကယ်မယ်နော်’
ကျနော်သည် မူမူ့၏လက်ကလေးတဖက်ကို ဆွဲကာ ပြောလိုက်သည်။ မူမူမှာ ကျနော့််၏ ယဉ်ကျေးဖွယ် ပြုမူချက်ကလေးကို လက်ခံလာပြီမို့ ညိမ်ညိမ်ကလေးပဲ ရှိနေပါသည်။
‘အော်-ဟုတ်လား ဒါဖြင့်အကိုတို့ နယ်ကပါဘဲလား’
မူမူမှာ မျက်လုံးကလေး အရောင်လက်လာခဲ့ပေသည်။ ကျနော်သည မူမူ့ကို စကားများပြောယင်း သူကလေး၏ ပုခုံးပေါ်သို့ လက်တင်လိုက်ပြီးနောက်တွင် သူ၏ကိုယ်လုံးလေးအား ရင်ခွင်အတွင်း ဆွဲယူလျက် မူမူ၏ ပါးမို့ကလေးကို မွှေးလိုက်ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် မူမူ၏ နှုတ်ခမ်းကလေးစုပ်လိုက်သည့်တိုင်အောင်ပင် မူမူမှာ ညိမ်သက်လျှက်ရှိပါသည်။
ကျနော်သည် မူမူ့ကို ခုတင်ပေါ်ဆွဲချလိုက်ပြီး မူမူ၏ရင်ကလေးပေါ်သို့ ကျနော်၏ ရင်ပတ်ကျယ်ကြီးဖြင့် ဖိကပ်ထားပါသည်။ ထို့အတွက်ပင် မူမူမှာ မျက်ရည်များတစိမ့်စိမ့်ကျဆင်းလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တော့ ကိုယ့်ကိစ္စအောင်မြင်ရေးကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
‘မူမူ့ကို သနားပါ အကိုရယ်’
‘သနားတာမှ အကို့ရဲ့ အသဲနှလုံးတွေ ကြွေတဲ့အထိသနားတာပေါ့ မူမူရယ်- ဘာကြောင့်ချင်ရတာလဲဟင်- အကိုနဲ့တွေ့မှပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေစမ်းပါ အချစ်လေးရယ်’
ကျနော်သည် မူမူ၏ နှုတ်ခမ်းတွေကို တအားကုန်ငုံ၍ စုပ်ယူထားကာ မူမူ၏ရမ္မက်ကုန်ပြင်းထန်လာစေရန်အတွက် သူကလေး၏ ကာမခလုပ်များရှိရာသို့ တစ်ခုပြီးတစ်ခု နှိပ်ကာ နိုးကြွလာစေရန်အတွက် ပထမဆုံး ရင်သားမို့မို့ကလေးထိပ်မှ နို့သီးခေါင်းလေးကို တရွရွပွတ်ချေနေမိပါသည်။
ထိုသို့ပွတ်ချေနိုင်အောင်လဲ အင်္ကျီကျယ်သီးကလေးကို တစ်လုံးချင်းဖြုတ်ပြီး အတွင်းခံ ဘော်လီအင်္ကျီကိုပါ ခဲခဲယဉ်းယဉ်း ဖြုတ်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျနော်၏ ဒူးခေါင်းကြီးတစ်ဖက်က သူမ၏ ဖွင့်ဖြိုးသွယ်လျသော ပေါင်တံကြီးပေါ်သို့ တင်ချိတ်လိုက်ပါသည်။
ကျနော်၏ အပြုအမူများမှာ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကြီး မဟုတ်ပဲ သူမ၏ အလိုဆန္ဒကို လိုက်လျောရကာ ကိုယ်လိုချင်သော ဆန္ဒခရီးကို လွယ်လွယ်နှင့်ရောက်လာစေရန်အတွက် ဖန်တီးယူသောနည်းပင် ဖြစ်၏။
ထိုသို့ ရင်သားဖြိုးဖြိုးကလေးမှတဆင့် ကျနော်လက်တွေမှာ အပြေးကလေး အောက်ဖက်သို့ ဆင်းသွားကာ သူမ၏ ၀မ်းပြင်သားကလေးကို ခပ်ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်ပေးနေမိ၏။
ဒါတင်မကသေး သူမ၏၀မ်းပြင်သားလေးတွေမှ တရွေ့ရွေ့အောက်သို့ဆင်းကာ ဆီးခုံမောက်မောက်ကလေးကို မနားတမ်း ထိုးဆွနေမိပြန်ကာ ဖြုကနဲနေတောအင် သူမ၏ထမီကလေးအား လက်ညှိုးနှင့်လက်မညှပ်ကာ ဖြတ်ကနဲ့ ဆွု၍ချွတ်လိုက်သည်အထိဖြစ်ပါ၏။
စိမ်းမြမြကလေးအဖြစ် တွေ့နေရသော တောတန်းကလေးမှ မို့မို့ခုံးခုံး တောင်ကုန်းလေူသဖွယ် စောက်ဖုတ်ကလေးသည် ကျနာ်၏လက်များရောက်သွားသော အခါတွင် ခပ်စောစောကထက် အရည်ပျော်လာရတော့သည့်အလား အထက်သွားနှင့် အောက်နှုတ်ခမ်းလေးများကို တအားကိုက်ထားတော့ပြီး ရွှေရင်မို့မို့လေးမှာလည်း နိမ့်ချီမြင့်ချီနှင့် လှိုင်းထသလို ပို၍ပို၍ မောက်လာပါတော့သည်။
ကျနော်သည် ဘယ်လိုမှဆိုင်းမနေတောဘဲ သူမ၏ဗဟိုချက်လေးမှ လက်တဆစ်နီးပါး မရှိတတ်သေသော အချွန်အတက် စောက်စေ့လေးကို တရွရွပွတ်သပ်ပေးလိုက်သောအခါမတော့ တဟင်းဟင်းနှင့်ပင် အံကလေးကြိတ်ရာက ပွင့်ထွက်လာပါတော့သည်။
ထိုအခါမှာတော့ ကျနော့လီးကြီးမှ လျှစ်စစ်လိုက်သည့်အလိုက် လှုပ်ရှားလာရတော့လျက် ဗြုံးကနဲ မူမူ၏ကိုယ်ပေါ်သို့ တကိုယ်လုံး မှောက်ချလိုက်ရာက စွင့်စွင့်ကားကားတင်ပါကြီးများပေါ်လာသည်အထိ ဆွဲမြှောက်မိပါ၏။ မူမူမှာ မျက်လုံးတွေကို စုံမှိတ်ကာ ကျနောပြုသမျှ နုတော့မည့်အသွင်က ထင်းထင်းကြီး ပေါ်နေပြီး သူမ၏ ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးကို ဗြုံးကနဲ မြှောက်လျက် ကျနော်၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင် ဆွဲချထားရာတွင်မူ စွင့်စွင့်ကားကား ဖွံ့ထွားညက်ညောလှသော တင်ပါးများမှ ဆူထွက်လျှက်လာရာက ကျနော်ကလည်း အလိုက်သင့် အလျားသင့် ကိုယ်ကိုကုန်းရာက ပုခုံးကလေးကိုင်ကာ အာသာငမ်းငမ်း ကြမ်းတော့မည့်အသွင်မှာ တကယ်တွေးကြည့်လျှင် ရင်တုံစရားကြီး ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်၏ လီးကြီးမှာ သူမ၏စောက်ဖုတ်ကလေးနှင့် ထိတွေ့နေသည့်တိုင်အောင် အပေါ်ယံအထက်လွှာတွင် ကလိပေးရာ မူမူ၏တင်ပါးကြီးများက အားမလိုအားမရ လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာရပြီး-
‘အကို-အကို’ ဟုပင် အသံကလေးညှင်းညှင်းနှင့် အံကလေးတင်းကာ ထွက်ပေါ်လာတော့သည်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူမ၏နှုတ်ခမ်းအစုံကို ငုံထားမိသည့်တိုင် လက်များကို တရွရွကလေး ရွှေရင်သွားဝယ် ကြွားကြွားဝင့်ဝင့်ကလေး စည်းချက်ကျနေပါသည်။
ထိုအချိန်မှာပင် ကျနောသည် မူမူကို အမြင့်ဆုံးသော အပူချိန်ဒီဂရီတွင်ရှိနေရာက သူမ၏ပါးမို့မို့ကလေးနှင့် လည်တိုင်ကြော့ကြော့ကလေးကို သွားဖြင့် မနာမကျကိုက်လိုက်ရာ လုပ်ငန်းကို ပထမဆုံးခရီစဉ် ခပ်ယဉ်ယဉ်ကလေးစလိုက်ပါသည်။
ကျနော့်လီးကို သူမစောက်ဖုတ်ဝသို့တေ့ပြီး ရှေ့ငုံ့ကာ သူမ၏နို့ကို စို့ပေးလိုက်သည်။ တဖန် ပေါင်ကိုကားစေပြီး လက်က သူမစောက်ဖုတ်အကွဲလေးကိုဟကာ ခပ်သာသာလေး ဆောင့်ထိုးလိုက်ပါသည်။ နှုတ်ခမ်းလွှာများမှာ ဟနေသောစောက်ဖုတ်အတွင်းသို့ ညပ်ဝင်သွားပါသည်။ နောက်ထပ်ပြန်ထုတ်လိုက်ပြီး လီးကိုထိန်းကာ ပြန်သွင်းလိုက် ဖြည်းညှင်းယုယစွာ လီးအနှုတ်အသွင်းလုပ်ပေးတော့ မူမူမှာ မနာကျင်ဘဲ အရသာတွေ့နေတော့၏။
စောက်စေ့နီရဲလေးကို ကျနော်ပွတ်ဆွဲယင်း အသွင်းအနှုတ်လုပ်ရာ မူမူမှာ ဇောကြွသည်ထက်ကြွလာတော့သည်။ စောက်ဖုတ်မှာလည်း စိုသထက်စိုလာတော့သည်။ စောက်ဖုတ်သည် အရည်များဖြင့် ချွဲပြီး အ၀င်အထွက်ကောင်းလာတော့၏။ ထို့ကြောင့် ကျနော်သည် လက်နှစ်ဖက်က ခါးကိုဆွဲဖက်ပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဆောင့်သွင်းလိုက်ရာ-
‘အို- အကိုရယ်- ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်’
လီးအဆုံးဝင်သွားတာမို့ သူမအောင့်သွားသည်။ လီးအရင်နှင့် မို့အိနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ဖတ်ကနဲ့ ဆုံမိပါသည်။ အနည်းငယ်နာသဖြင့် သူမကဖင်ဆုံကားကြီးကို မသိမသာလှုပ်ပေးသည်မို့ ကျနော့်လီးကို လျှောနဲပြန်ထုတ်လိုက်ပြီး ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ပြန်ဆောင့်သွင်းလိုက်ရာ သူမကလည်း ပေါင်တံဖြူဖြူကိုအားပြုပြီး တင်ပါးကို ခပ်ကော့ကော့မြှောက်ပေးရာ နှစ်ယောက်စလုံး၏ နှုတ်ခမ်းများ ပူးကပ်စုပ်နမ်းယင်း ကာမအရသာများဖြင့် စိမ့်ငြိမ်နေကြပါသည်။ လုံးကျစ်မို့မောက်သော သူမရင်သားနှစ်မွှာမှာ ကျနော့်လက်ထဲတွင် တဖျဉ်းဖျဉ်း တဟင်းဟင်း ဆုပ်နယ်နေသလို ဖင်အိအိထွားထွား မို့မို့မှာလည်း ကျနော်၏ကြီးမားသော ပေါင်တံနှစ်ဖက်အောက်မှာ တလူးလူးတလှိမ့်လှိမ့် ညှပ်ခံနေပါတယ်။
ကာမဇောထန်လာသော မူမူမှာလည်း သူမ၏တင်ပါးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းကော့ထောက်ပေးကာ ကျတော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို သိုင်းဖက်ယင်းက တဏှာရေယာဉ်ကြောမှာ မြောပါလာသည်။
ကျနော်ကလည်း မိမိ၏ပေါင်တန်အားယူ၍ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ချလေရာ၊ လီးတံကလည်း သူမစောက်ဖုတ်သာမက စောက်စေ့နီရဲရဲကိုပါ ခပ်ဖိဖိပွတ်သွားလေရာ မူမူမှာ အကြောတွေတဆတ်ဆတ်တုံကာ ကာမအရသာထူးကို ခံစားယင်း အဆောင့်ရော အမှောက်ရော ဆီးချက်ကျကျ လုပ်လေတော့ရာ နှစ်ယောက်သား တဏှာဇောကြွလေလေ တဖတ်ဖတ်သံညံလာလေတော့၏။ အားမလို အားမရဟန်ဖြင့် သူမကကော့ပေးပြီး ၀င်လာသော ဆောင့်ချက်ကို အားပါးတရ တင်ပါးစုံးများကို မြှောက်ပေးတော့၏။
လီးတစ်ချောင်းလုံးမှာလည်း တင်ကြပ်သော်လည်း နူးညံ့အိစက်သော စောက်ဖုတ်အတွင်း ပြွတ်ကနဲ့ ဆောင့်ဆောင့် ၀င်လာတော့၏။
နှစ်ယောက်စလုံး ကာမဖီလင်များ တက်လာကြသည့်အလျောက် သူမသည် ကျနော်၏လည်ပင်းကို အားပါးတရ ဖက်သိုင်းကာ ခါးရောတင်ပါးပါ အချက်ကျကျကော့ပေး၏။
နှစ်ယောက်စလုံး မျက်လုံးမဖွင့်နိုင်အောင် ထူးကဲသော အရသာခံစားကာ ကျနော့်နှုတ်ခမ်းလွှာများသည် သူ့နို့အုံကို တရွရွစိုပေးပါသည်။
လျှာဖျားနုနုကလည်း နို့ရှိ နို့သီးခေါင်းအရာကလေးကို တယုတယ ထိုးဆွဲပေးလိုက်ရာ မူမူမှာ ကာမဖီလင်များ တက်လာချိန်တွင် ကျနော့်လီးကြီးမှာ ပိုပြီးတုတ်လေ အကြောများတဆတ်ဆတ်လှုပ်ခါ အထူးခြားဆုံး အရသာများရရှိရန် နိုးလာပါသည်။
မူမူက အိအိထွားထွားတင်ပါးများကို အညိမ်မနေလှုပ်ရှားနေပြီး စောက်ဖုတ်ထဲက အရေကြည်တွေကလည်း စိုနေပြီမို့ အချက်များများ ဆောင့်ရပေမဲ့ ကျနော်မောဟန်မပြဘူး။
လီးတစ်ခုလု့း အရည်တွေ ချွဲကျိကျိနဲ့မို့ ဆောင့်ရနှုတ်ရမြန်လှပါသည်။ တင်ပါးထွားခြင်း ပေါင်တံအိထွားခြင်းကြောင့် သူမမှာ အလိုးခံနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
မဟုတ်ယင်မလွယ်ပါ။ တပြွတ်ပြွတ်ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း သူမခမြာ အင့်ကနဲ ဖြစ်သွားပါသည်။ မူမူခမြာ ဖင်တစ်ခုလုံးကို အားရပါးရ မြှောက်ပေးယုံသာမက ပေါင်ကို စိလိုက် ကားလိုက် နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ်ပေးလိုက်နှင့် မနားရရှာပေး။
လီးချောင်းတစ်ခုလုံးကလည်း စောက်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ မဆံ့မပြဲ ပြုတ်တူနှင့်ညှပ်ထားသလို သွေးကြေားတွေက တဆတ်တဆ်လှုပ်နေတာက ကျနော်။
ကြည့်ပါ။ ကျနော်ရော သူမပါ ပန်းတိုင်ရောက်တော့မှာမို့ အားရပါးရ ဆောင့်နေကြပါသည်။ စောက်ဖတ်ုတခုလုံး ဖျင်းကနဲ ဖျဉ်းကနဲ ဖြစ်လာကာ ပေါင်တွင်ကြောတွေလည်း တဖြုတ်ဖြုတ်နှင့် ရမ္မက်ဇော လျှံကျလာပါသည်။
ကျနော့်မှာလည်း လီးတန်ကြီးတစ်ခုလုံ တဆတ်ဆတ်လှုပ်လာယင်းက ကျဉ်ကနဲ ကျဉ်ကနဲ စိမ့်တက်လာချိန်မှာ သူမက စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသာတွေနဲ့ လီးကို ညှစ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ပေါင်ထွားထွား တင်ပါးဆုံကြီး ခွက်ဝင်သွားပြီး ကာမအရေတွေဟာ စောက်ဖုတ်ထဲမှာ စိုကနဲဖြစ်သွားပြီး တစ်ချီပြီးသွားပါသည်။
ကျနော့်ရဲ့ သုတ်ရည်တွေကလည်း အားရပါးရထွက်လာတာမို့ စောက်ခေါင်းအတွင်း သုက်ရည်ချင်းဆုံမိပြီမို့ သူမရော ကျနော်ပါ မလှုပ်မယှက်နှင့် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အားပါတရ ဖက်ကာ စည်းစိမ်ယူကာ ကျသွားပါတော့သည်။
ကျနော်သည် ကောင်းကင်ကို ကြည့်လိုက်သောအခါ မိုးသားများက တလှိမ့်လှိမ့်တက်လာပြီး၊ မကြာမီမိုးများ တ၀ုန်းဝုန်း တဗြုံးဗြုံး ရွာချတော့မည်မို့ နွားတွေကို ခပ်သွက်သွက်မောင်းယင်းက လယ်ကွက်လောက်သာသာရှိသေးသော လယ်ကလေးကို ခပ်သွက်သွက်ကလေး နွားများကို ကြိမ်တို့ကာ ထယ်ချောင်းကို ဖြောင့်ဖြောင့်ဆွဲကာ ခွဲလျက်ရှိပါသည်။
ကျနော်မြော်လင့်နေသူမှာ အခုထိ မလာသေးပါ။ ၀မ်းထဲမှာလည်း တကြုတ်ကြုတ်နှင့် ဆာလောင်လျက်ရှိပါသည်။ နံနက်စောစောက ယူဆောင်လာသော ရေနွေးကြမ်းမှာလည်း ကုန်လုနီးနီးဖြစ်နေပါသည်။ အမှန်ကတော့ ထိုအချိန်ဆိုပါမူ အစားအသောက် တစ်ခုခုတော့ လာရောက်ပို့စမြဲပင် ဖြစ်သည်။
အမှန်စင်စစ်ကတော့ ကျနော့်မှာ ဂုဏ်ရည်ကြီးမား သားသမီးတစ်ဦးဖြင်လင့်ကစား လယ်ထဲသို့ ရန်ဖန်ရန်ခါလောက်သာ ဆင်းခဲ့ပြီး မြို့ပေါ်တွင် ကျောင်းနေခဲ့ရာ ၈တန်းမျှအောင်ပြီး ကျောင်းထွက်လျက် အိမ်သို့ပြန်ခဲ့ရပါသည်။
ကျနော့်ဇနီဖြစ်သူ အစောနှင့် တွေဆုံရခြင်းမှာ အတော်ကလေး ထူးသည်တော့မဟုတ်ပါ။
ကျနော်မြို့ဖက်သွားလေတိုင်း အစောတို့ရွာကလေးကို ခဏတဖြုတ်လောက်တော့ဝင်ပြီး အမောအပန်းဖြေရသည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အပန်းဖြေချင်စဖွယ်ဖြစ်ရခြင်းမှာလည်း အစောတို့ရွာဦးထိပ်တွင် ထန်းတောကြီးရှိသောကြောင့်ဖြစ်၏။
ထိုထန်းတောအုပ်ကလေးတွင် ကျနော်နှင့် အစော နှဖူးစာဆုံခဲ့ရခြင်းဖြစ်၏။ တစ်နေ့တွင် ဈေးဝယ်ပြီးအပြန် ထန်ရည်အမူးလွန်ကာ အပြန်ခက်နေချိန်ဝယ် လှည်းမောင်းလာသည့်အစောက ကျနော့်အား သနားညှာတာစွားဖြင့် တင်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ အစော၏ရွာနှင့် ကျနော်တို့ရွာမှာ တခေါ်လောက်သာဝေးသည်မို့ ဘာမျှမကူညီနိုင်စရာမရှိပေ။
ကျနော့မှာ ပထမတော့ သတိမရလှပ်။ သတိရ၍ ကြည့်သောအခါ လှည်းကောက်ရိုးခင်းပေါ်တွင် ခွေခွေကလေးပါလာသော ကျနော့်အဖြစ်ကို သတိရလာပြီး သရက်ထည်ထမိန်နှင့် မိန်းကလေးတစ်ဦး၏ တင်ပါးကြီးနှင့် ကျနော်၏ မျက်နှာက ဂဟေဆက်သလို လှည်းဆောင့်ယင်း ထိတွေ့နေပါသည်။
မျက်နှာကို မမြင်ရသေးလင့်ကစား သူကလေး၏ ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုး တင်းတင်းယင်းယင်း တင်ပါးကြီးတွေကို လက်နှင့် ဖျစ်မကြည့်သေးလင့်ကစား၊ အပျိုတစ်ဦးဆိုတာကတော့ သေချာသလောက် ကျနော်ကသိလိုက်ပါသည်။
ကျနော်ကလှည်းမောင်းနေသူကလေးကို မည်သူများဖြစ်သည်ဟု အသာကလေး ကြည့်လိုက်သောအခါ ကျနော်တို့ရွာနှင့် မနီးမဝေးမှ အစောဖြစ်နေပြီး ကွမ်းတောင်ကိုင်ရသူ အလှမယ်တစ်ဦးအဖြစ် ထင်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်သည်ကို ကျနော်က တွေ့လိုက်သဖြင့် ၀မ်းထဲတွင် ကြိတ်ကာ ၀မ်းအသာကြီးသာမိပါသည်။
အစောမှာ တစ်ခါတစ်ခါ ကျနော့်ထံကို ခေါင်းကလေး သမင်လည်ပြန်ကြည့်ပြီး
‘အင်း.. အခုထက်ထိ အမူးလည်း မပြေသေးဘူး၊ လူကထန်းရည်တမြမြပေမဲ့ လူကတော့ လူချောပါ.. အဟိ’ ဟု တယောက်ထဲပြောကာ ကြိတ်၍ရယ်မောလိုက်ပါသေးသည်။
တဖန် ကျနော်တကယ်ပင်အိပ်ပျော်သတိမရဖြစ်နေပြီဟုထင်နေသဖြင့် ကျနော်၏နဖူးများကို မသိမသာ စမ်းသပ်လိုက်ပြန်သေး၏။
ကျနော်သည် သူ၏သဘောကို သိလိုသောကြောင့် အာ-အာ-အင်-အင်နှင့် ညီးညူရာက သူမ၏တင်ပါးကြီးကို ခေါင်းနဲ့တိုးယင်း ခါးကို သိမ်းဖက်ထားလိုက်ရာ ရုတ်တရက်ဆိုသော် ‘အို’ ဟုအသံကလေးက ကြောက်ကြောက်လန့်လန့် ပွင့်ကန်ထွက်လာပါတော့၏။
သို့ပေမဲ့ သူကလေးမှာ အာမေဋိတ်အသံကလေးနှင့် ယောင်ယမ်းလိုက်ပေမဲ့ ရုန်းကန်ခြင်းမပြုဘဲ ကျနော်က သူမ၏ခါးကို ယစ်ဖွဲထားလေသည့်လက်ကြီးကို မရဲတရဲနှင့်ကိုင်တွယ်လျက်ရှိပါသည်။
အစော၏ခါးနှင့် ပေါင်ရင်းကို ထိတွေ့နေရသဖြင့်လည်း အစောကတော့ မပြောတတ်။ ကျနော်ကတော့ ချစ်ရမ္မက်တွေ မီးဟုန်းဟုန်းတောက်လာရပါ၏။
ရင်တစ်ခုလုံးမှာလည်း ရေငတ်သူပမာဖြစ်လရသလို တစ်ကိုယ်လုံးတွင်လည်း ဓာတ်လိုက်ခံရသူပမာ တဒိန်းဒိန်းနှင့် ဖြစ်နေတော့၏။ အစောကိုယ်တိုင်လည်း ကျနော့်လိုပင် ခံစာရလျက်ရှိကြောင်း မပြောပဲနှင့် သိသာလျက်ရှိပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူမ၏ ကိုယ်ကလေးမှာ တရွေ့ရွေ့ကျနော့ဆီသို့ မှီကျလာသလို နတ်ပူးသည့်သဖွယ် တုန်တုန်လှုပ်လှုပ်ကလေး ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။
ထိုအချိန်မှာပင် ချောင်းတံတားလေးကို ရောက်လာပြီး နွားများကို ရေတိုက်လိုက်ပါသည်။ ထိုနေရာမှာ တောတန်းကလေးဖြစ်သောကြောင့် လူလည်း ပြတ်လှပါသည်။ ကျနော်သည် သူလေး၏ခါးကြီးကို တွယ်ဖက်ထားရာ လက်များပြေလျော့ကျသွားပြီး သူကလေး၏ တုတ်တုတ်ဖြိုးဖြိုး ပေါင်တံကြီးများအပေါ် လက်ရောက်ကာ မသိမသာဆုတ်ကိုင်ထားမိ၏။
ကျနော်ဆုတ်ကိုင်ထားယုံမက အသာအယာပွတ်သပ်နေသကဲ့သို့ ပေါင်ရင်ကိုတိုးဖိကာထားမိပါသည်။ ထိုသို့ ကျနော်၏အပြုအမူကြောင့်ပင် သူကလေးကိုယ်တိုင်ပင် မနေနိုင် မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာဟန်ရှိပါသည်။
ကျနော်မှာ ကြာရှည်စွာ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ချက်ခြင်းပင် သူမဘက်လှည့်ကာ သူမ၏ ခါးကလေးကို ရစ်ပတ်နေလိုက်မိသည်။
ထို့နောက်မတော့ ကျနောဟာ အစောကိုယ်လုံးလေးကို ဆွဲယူလိုက်ရာက-
‘အစော.. ကိုယ့်ကိုချစ်တယ်နော် ချစ်တယ်မဟုတ်လား’ ဟု အာလုတ်သံကြီးနှင့်ပြောယင်း ကမန်းကတန်းသူလေး၏ ပါးကလေးများကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် မွှေးလိုက်ပါ၏။ ထိုအခါမှာတော့ သူကလေးမှာ မျက်ရည်ကလေးအ၀င့်သားနှင့် ဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ပဲ-
‘ဟဲဟဲ- ဘာရမလဲ အစောရယ် အကိုက နိုးနေတာကြာပြီ၊ အခုမှ ရှက်မနေပါနဲ့ အစောရာ’ ကျနောက လက်ရော နှုတ်ခမ်းရော ပြောင်းဆန်ကာအလုပ်ပေးကာ သူကလေး၏ ကိုယ်လေးကို ခပ်သွက်သွက်ကလေး ပွေ့ချီလျက် ခြုံတောကြီးအတွင်း ပြေးဝင်မိပါတော့သည်။
‘ဟင့်အင်း.. ဟင့်အင်း.. ညီမ ဒီအထိတော့ မလိုက်လျောပါရစေနဲ့ အကိုရယ်’
အစောခမြာ သနားစရာ နွားငယ်ပမာ တောင်းပန်ရှာပေမဲ့ ကျားသတ္တ၀ါ ကျနော်ကတော့ အကြင်နာတွေဖက်၍ လက်လွှတ်လိမ့်မည် မထင်ပါနဲ့။ ကျနော်ရဲ့ လျှင်မြန်သွက်လက်လှတဲ့ လက်တွေက အစောရဲ့ အသားစိုင် အသားခဲတွေကို ဆွဲယူဆုပ်ကိုင် ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးချနေပါတယ်။ ပြေလျော့လျော့ အစောရဲ့ ထမီကို ချွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ ခုံးခုံးမို့မို့ ဖောင်းအိ နေတဲ့ အစောက်ဖုတ်ဟာ လက်တ၀ါးမျှရှိတာကို ကျနော်ဟာ လက်နဲ့ အသာအယာ အုပ်ကိုင်နေသည့်အချိန်မှာ အစောတစ်ကိုယ်လုံး တွန့်၍လာရာမှ
‘အို-အကို ဟင့်ဟင့်-ညီမ ရှက်ပါတယ် အကိုရယ်’
အဲဒီလို ညီးတွားရွတ်ဆိုနေပြန်ပါတယ်။ ကျနော်ဟာ တစ်ဆင့်ပိုကဲပြီး လက်ဝါးကို အစောစောက်ဖုတ်ကွဲကြောင်း တစ်လျှောက် တစောင်းပွတ်တိုက်ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ အစောမှာလည်း တွန့်၍တွန့်၍သွားပြီး သူ့လက်ကလေးနဲ့ ကျနော့်ရဲ့ လက်များကို ဖက်ယင်း တဟင်းဟင်း ညီးတွားနေရှာတယ်။ ကျနော်လည်း အလွတ်မပေးဘဲ အစောရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို သိမ်းဖက်ထားပြီး ပါးမို့မို့ကလေးကိုပါ နှုတ်ခေါင်းကြီးနစ်မြှုပ်သွားအောင် မွှေးကြူလိုက်ပါတယ်။ ပါးကလေးကို မွှေးကြူရာက တဆင့် သန္တာရောင်နှုတ်ခမ်းကလေးကို ကျနော့်နှုတ်ခမ်းနှင့် ငုံပြီး တမျှင်းမျှင်း စုပ်ယူလိုက်တော့ အစောမှာ အသဲနှလုံးကို ဆွဲယူနှုတ်သလို ခံစားလိုက်ရ၏။
ကျနော်ဟာ အတွေ့အကြုံရှိထားသူမို့ အပျိုရိုင်းပန်းကလေး အစောကို ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းမလုပ်ပဲ အစောစိတ်ပါလက်ပါ ဖြစ်လာစေရန် နူးနှပ်၍နေပါသည်။ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ယူနေယင်းက လက်ကလည်း အစောရဲ့ အပေါ်အင်္ကျီကျယ်သီးကလေးတွေကို တစ်လုံးချင်းဖြုတ်နေပါသည်။ ကျယ်သီးကလေးတွေ အကုန်လုံးပြုတ်သွားသည့်အခါ တင်းရင်ပြည့်ဖြိုးပြီး လုံးဝန်းနေတဲ့ ရင်နှစ်မွှာကို အတင်းချုပ်နှောင်ထားတဲ့ အတွင်းခံဇာဘော်လီကလေးကို တွေ့ရတယ်ဆိုရင်ပဲ ကျွန်တော်ဟာ အတွင်းခံဇာဘော်လီချိတ်တွေကို ဖြုတ်ပြီး ခွာလိုက်တဲ့အခါ အတွင်းခံရဲ့ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအောက်မှ လွတ်လပ်ပြီဖြစ်တဲ့ ရွှေရင်နှစ်မွှာဟာ ထင်းလင်းစွာ ပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်။ လုံးဝန်းသည့် ရွှေအဆင်းဝင်းဝင်းဝါလျက် နို့သီးလေးက ပတ္တမြားခဲပမာ ရဲရဲနီလျက်ရှိပါသည်။
ကျနော်က အစောရဲ့ နို့ကို လက်ဝါးနဲ့ အသာအယာအုပ်ကိုင်ပြီး ဆုတ်ချေပွတ်သပ်ပေးယင်းက ဘယ်လက်ညှိုးနှင့် လက်မကြားတွင် နို့သီးထိပ်ကလေးကို လှိမ့်ကစားပြီး အမျိုးမျိုးနဲ့ ချော့မြူထားရာမှ အစောပေါင်နှစ်လုံးကို ဘေးတစ်ဖက်ဆီ ကား၍ထားပြီး အစောပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲ ငုတ်တုတ်ဝင်ထိုင်ပြီး ကျနော်ရဲ့လီးနဲ့ အစောရဲ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးကို ပွတ်တိုက်ပြီး အသာအယာထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။
ထိုအခါ အစောဟာ တွန့်တွန့်လူးမျှနာကြင်သွားသလိုရှိပြီး လက်ကလည်း ကျနော့်ရင်ဘတ်ကို တွန်းထားပြီး
‘အား.. အမေ့.. အင်း.. နာတယ်.. နာတယ်.. အကိုရယ်’
ပါးစပ်ကလည်းပြော ခေါင်းတခါခါနှင့် ရုန်းကန်နေပါသည်။ ကျနော်ဟာ ဆက်မသွင်းသေးပဲ ရပ်ထားရာမှ အစောရဲ့ တုန်ခါနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်နမ်းလိုက်ပါတယ်။ နို့သီးခေါင်းကလေးကို ငုံ၍ စုပ်ယူတဲ့အခါမှာ အစောမှာမည်သို့သောအရသာ ခံစားရသည်မသိ။ ပါးစပ်မှ တအင်းအင်း တဟင်းဟင်း ညီးညူနေရှာပါတယ်။ ကျနော်ဟာ သွင်းလက်စလီးကို အသာအယာ အနှုတ်အသွင်းပြုယင်းက
‘ညီမ.. နာသေးသလားဟင်..’ လို့ အစောရဲ့ နားနားတိုးကပ်ပြီးမေးတော့ အစောဟာ မျက်လုံးလေး စုံမှိတ်ထားရာက မပွင့်တပွင့်အသံကလေးနှင့်-
‘နာတာပေ့ါ အကိုရယ်’ လို့ဖြေရှာတယ်။ ကျနော်ဟာ အစောမနာမကြင်ပဲ စိတ်ပါလာအောင် အစော၏ချွေးစို့နေသော နှဖူးလေးကို လက်ဖြင့်သပ်ပေးယင်းနမ်းလိုက်တယ်။ လက်တဖက်က ကြောပြင်ဖွေးဖွေးကို ပွတ်တိုက်ပေးလိုက်၊ ဖင်သားအိအိကြီးကို ဆုတ်နယ်ပေးလိုက်၊ ဖင်အကွဲကြောင်းကြားကလေးကို ပွတ်ပေးလိုက်၊ လုပ်ပေးနေပါတယ်။ ကျနော့်လီးကြီးက အစောစောက်ဖုတ်အတွင်း ပြည့်သိပ်ကျပ်နေသည်ကို ခံစားနေရ၍ ကျနော်အသာအယာ စောက်ဖုတ်အတွင်းမှ တ၀က်ခန့်လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်ပြီး တ၀က်နှင့်ပင် အထုတ်အသွင်းလုပ် ညှောင့်ပေးနေပါတယ်။ အစောနာကြင်မှုအရသာ ပျောက်စေရန် ပါးစပ်မှ နီရဲထောင်ထနေသော နို့သီးခေါင်းလေးနှစ်လုံးကို တဖက်တချက် လက်ညှိုးနှင့် လက်မညှပ်၍ ကလိပေးနေပြန်၏။
အစောမှာ မိမိစောက်ဖုတ်အတွင်း အဆုံးထိဝင်လာသော လီးကြီးကြောင့် စပ်ကျင်ပြီး အောင့်သွားရာက မူလခံစားရသော အရသာများ ပျောက်သွားမတတ်ဖြစ်ရသည်။ အခုတော့လည်း သူ၏အချော့အမြူ အနှုးအဆွးကောင်းမှုကြောင့် ဖီလင်တက်လာပြန်သည်။
ကျနော်သည် တ၀က်သာသာဆောင့်ပေးနေရာမှ အစောခံနိုင်လာမှန်းသိ၍ လီးကြီးကို အဖုတ်ဝသို့ ဒစ်ပေါ်ထိဆွဲထုန်ပြီး ပြန်ဆောင့်ထည့်လိုက်သည်။ အရည်များကြောင့် ချောမွေ့စွာဝင်သွားပြီး အစောတစ်ချက်ကော့ပေးလိုက်သော်လည်း အသံထွက်မလာတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ကျနော့်လီးကို အဖျားအထိဆွဲထုတ်ပြီး အရင်းထိတိုင်ဆွက်တိုက်ကြီး ဆောင့်ချပေးနေတော့သည်။ အစောမှာ ခံစားရသော အရသာများကောင်းနေ၍ ရင်မှာငြိမ့်ကနဲ့ သိမ့်ကနဲ့ ဖြစ်နေရတော့သည်။ တင်းမှာထောင်တနေသော လီးကြီးက အဖုတ်အတွင်းသို့ ၀င်သွားသောအခါ ရင်မှာစို့တက်သွားပြီး ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်သောအခါ ရင်မှာဟာကျန်ခဲ့၏။ ထိုအခါများတွင် အစောသူ့ကို အတင်းပင်ဖက်တွက်ထားမိ၏။
ကျနော်သည် အစောရဲ့ ဒူးနှစ်လုံးကိုဖက်ပြီး တဖြည်းဖြည်း တချက်ချင်းဆောင့်ဆောင့်သွင်းနေပါသည်။ အစောမှာ ခံစားနေရတဲ့ အရသာက တဖြည်းဖြည်းကောင်းလာသလိုရှိသဖြင့် ကျနော်ရဲ့ကြောကို တအားဖက်ထားယင်း
‘အချစ်… ချစ်… ချစ်လိုက်စမ်းပါ ကိုရယ်… သဘောရှိအကို’
ပါးစပ်ကပြော အောက်ကနေပြီး ခါးကလေးကော့ပေးနေပါသည်။ ကျနော်လည်း အစောကို အစောအလိုကျ အားပါးတရာကုန်းဆောင့်နေပါတော့သည်။ အစောဟာ ငါးဖယ်ပျံသလို ကော့ပျံနေရာမှ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်လာပြီး
‘အကိုရယ်.. ကောင်း.. ကောင်းလိုက်တာ.. အား..း အင်း… ဟင်းး’ လို့ ညီးယင်း စောက်ခေါင်းတစ်ခုလုံး ပွစိပွစိနှင့် တစ်ချီပြီးသွားပါသည်။
ကျနော့မှာတော့ သဲသဲမဲမဲကုန်း၍ ဆောင့်လိုးနေတုန်းပါပဲ။ အစောမှာတော့ မျက်လုံးကလေးမှေးစင်းလျက် ကျနော့်ရဲ့ ကြမ်းရမ်းစွာ ဆောင့်လိုးခြင်းကို အံကြိတ်ခံနေရတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်ဟာ အဆောင့်ရပ်ထားယင်း အစောပါးပြင်ကလေးကို ငုံ့မွှေးယင်း-
‘ညီမ.. ဘယ့်နှယ့်လဲ ကောင်းရဲ့လား’
အစောဟာ ရှက်စနိုးမျက်နှာဖြင့် ‘အို.. အကိုကလဲ ဘာတွေမေးမှန်းမသိဘူး’ အဲဒီအခါကျနောက အစောရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်ယူနမ်းလိုက်ယင်း ပြန်လည်လှုပ်ရှားစ ပြုနေပါသည်။ အစောဟာ စောစောကလို မျက်လုံးလေး မှေးစင်းရင် ခါးကလေးကော့၍ တမျိုး၊ ဖင်ကြီးနှစ်လုံးကို ပင့်၍မြှောက်၍ တဖုံ၊ အစောကိုကျနော်လိုးသမျှ တုန့်ပြန်နေပါသည်။
အစောမှာ ဆန္ဒရမ္မက်ပြန်တက်လာပြန်၍ ပေါင်တံကြီးနှစ်ချောင်းကို စုလိုက်ကားလိုက်လုပ်ပေးယင်း လူးလွန့်လာတယ်။ ကျနော်အစော၏ ပေါင်ကြီး၂ချောင်းကို ပုခုံးတဖက်တချက် ထမ်းတင်လိုက်ပြီး လီးကြီးကို အဖုတ်ဝတော့ထားယင်း လက်နှစ်ဖက်က အစောပုခုံးနှစ်ဖက်ကို စုံကိုင်ကာ သွေးတို့စမ်းသည့်သဘောဖြင့် ဆောင့်ချလိုက်ပါသည်။ အစောဖင်ကြီး တချက်ကော့တက်သွားသည်မှအပ ထူးခြားမှုမပြ။ ထို့ကြောင့်လည်း လေးငါးဆယ်ချက်မျှအသာဆောင့်ယင်း အရှိန်ယူလိုက်သည်။ အရှိန်ရလာတော့ ကျနော်မှာ စိတ်ကို လွှတ်ယင်း အားရပါးရ ဆောင့်နေမိတော့သည်။
‘အို.. အကိုရယ် ဖြည်းဖြည်းဆောင့်ပါ.. တကယ်တည်းမှဘဲ အကိုရယ်… အဟင့်အဟင့်’
ကျနော်မှာ ပြီးကာနီးမို့ ရှိသမျှအစွမ်းကုန်အားပြုပြီး၊ ဖိ၍ဖိ၍ ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေပါသည်။ အစောမှာ လူးလွန့်ရာမှ
‘အဟင့်…ဟင့်.. အကို.. အကို.. နာနာဆောင့်လိုးစမ်းပါ.. တအားဆောင့်စမ်းပါ. ဟုတ်ပြီးအကို.. အား..ဟင့်.. ကောင်း.. ကောင်းလိုက်တာ.. ဟင်းဟင်းဟင်း’
ကျနော်လည်း နောက်ဆုံးပြီးကာနီးပြီးဖြစ်၍ အစော၏စောက်ဖုတ်ကျဉ်းကျဉ်းကလေးထဲသို့ အချက်နှစ်ဆယ်ခန့် ဆက်တိုကကြီး ဆောင့်လိုးထည့်လိုက်ရာ၊ အစောမှာ တစ်ကိုယ်လုံး သိမ့်သိမ့်တုန်ခါပြီး ကျနော့်ကို သိမ်းကြုံးပွေ့ဖက်လိုက်ချိန်မှာ နှစ်ဦးသာ လောကအရသာကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ခံစားလိုက်ရပါတော့သည်။
ကျနော့်ဇနီးအစောနှင့်ရခဲ့သည်မှာလည်း ဤအဖြစ်အပျက်ကလေးက စခဲ့ပါသည်။ ကျနော်သည် နွားများကို ဖြုတ်လျက် အိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ မိုးမှာလည်း သဲသဲမဲမဲနှင့် ရွာကောင်းတုံးဖြစ်၏။ လေပြင်းတွေကလည်း သဲသဲမဲမဲတိုက်ခတ်နေပြန်ရာ ခေါင်းပေါ်တွင်ပါလာသော ခမောက်ကလေးပင် လွင့်ထွက်မသွားအောင် မနဲကြီးဖေးမ ကိုင်တွယ်သွားနေရပါ၏။
ကျနော်တို့အိမ်ကလေးမှာ ရွာအစွန်တွင်ရှိပြီး ကျနော်၏ဇနီးအသံကိုလည်း မကြား၊ မီးခိုးလည်းမတွေ့ရ။ ကျနောသည် နွားတင်းကုန်းထဲဝင်လာကာ အိမ်မဆီသို့ လှမ်းလာခဲ့သည့်တိုင်အောင် အစော၏အသံမှာ လုံးဝပျောက်ကွယ်နေပါသည်။ ကျနော်အိမ်အနီးကပ်လာကာ ထရံပေါက်မှ ချောင်းကြည့်ရန်အတွက် ကုန်းလိုက်စဉ်မှာပင်-
‘ကိုခိုင်.. ပြန်ပါတော့.. အိမ်ကလူကြီးကို ထမင်းသွားပို့ရအုံးမယ်.. ကိုခိုင်ရယ်’ ဟု ပြောလိုက်သံကြောင့် ကျနော်၏ ဦးခေါင်းမှာ ချာချာလည်းသွားတော့သည်။ ထိုအသံကြောင့် လျှင်မြန်စွာ ထရံပေါက်မှ ချောင်းကြည့်လိုက်ရာ၊ ပဒုမပေါင်တို ဇာတ်ခင်းနေသည်ကို ဘွားကနဲ တွေ့ရပါသည်။ ဇာတ်လိုက်က အံ့သြစွာကြုံတွေ့ရပါ၏။ ကျနော်၏ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း ဖြစ်နေသောကြောင့်ပါ။ သူတို့နှစ်ဦး၏ မြင်ကွင်းမှာလည်း ရှင်းလင်းလှပါသည်။ အင်မတန်မှလည်း ရဲရဲတင်းတင်း ဆက်ဆံနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
‘မြန်မြန်ရှင်.. မြန်မြန်.. ရှင်ဟာ ဇွတ်ကြီးပဲ’
‘ဟဲဟဲဟဲ.. ငါက ဇွတ်မဟုတ်ရပါဘူးကွာ.. မင်းကစလို့ ငါကလိုးနေရတာမဟုတ်လား’
ခိုင်ဦး၏အသံက ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ ကျနော်သည် သူငယ်ချင်းကို ယုံစားမိသောကြောင့်လာ၊ တဖန် ကျနော့်မိန်းမ အစောကိုယ်တိုင်ကလည်း တဏှာကြီးလှသော မိန်းမတဦးမို့လား၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော့်အဖို့ အတော်ကလေး ဒေါသဖြစ်လာသော်လည်း၊ သူတို့နှစ်ပါကြည်ဇာတ်ထုတ်ကို အစအဆုံးကြည့်နေမိပါသည်။
ခိုင်ဦးရော အစောပါ အ၀တ်အစားမရှိကြပါ။ အစောမှာ တကိုယ်လုံးဖြူဖွေးသောအဖြစ်က သူ၏တင်ပါးကြီးတွေ ကော့ကော့ကာ ထုံးစံအတိုင်းပင် ကော့ပေးနေသလို ခိုင်ဦးကလည်း အစော၏ပေါင်နှစ်လုံးကို သူ့အပေးဆွဲတင်ကာ ဒလကြမ်း အသောနှင်လျက် ကာမဇာတ်ထုတ်ကြီးကို သွင်သွင်ကြီးခင်းနေပါ၏။ ခိုင်ဦး၏လီးကြီးကလည်း အတော်ကလေးပင် ခေါ်တောဆန်ဆန်ကြီးမားလှသလို တအားဆောင့်ကာဆောင့်ကာလိုးလိုက်သောအခါမှာတော့ အစော၏တင်ပါးကြီးတွေပင် ကြုံ့ကာကြုံ့ကာ ၀င်သွားတော့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျနော်၏စိတ်တွေမှာလည်း မီးဟုန်းဟုန်းတောက်ကာလာရပါ၏။
ခပ်စောစောက ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းအပြည့်နှင့် မိုးသဲလေသဲပြေးလွှားလာရခြင်းတွေသည် ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ကွယ်၍ သွားတော၏။ ကျနော်သည် နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ပါသည်။ ကျနော်လာခဲ့သည်မှာ သိပ်မကြာလှသေးပါ။ ထိုသို့သောအချိန်ဝယ် ဒင်းတို့နှစ်ယောက်ကို သုတ်သင်ပစ်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်မို့ ကျနော်သည် နံရံတွင်ထိုးထားသော ကိုင်းခုတ်ဓားကိုယူ၍ အိမ်ပေါ်သို့ လျှင်မြန်စွာတက်ပြီး သစ္စာဖောက်သော သူငယ်ချင်းနှင့် ဖောက်ပြန်သော မိန်းမကို အဆုံးစီရင်လိုက်ပါတော့သည်။
ဂျပန်များကြီးစိုးသောအချိန် ကျွန်တော်ရွာတွင် မနေရဲတော့ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျနော့်မိန်းမ အစောနှင့် ခိုင်ဦးကို သတ်ခဲ့မိသည့်အတွက် ကျွန်တော် ၀ရမ်းပြေး လူသတ်သမားဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ ကျနော်ထွက်ပြေးလိုက်ခြင်းမှာ ပိုဆိုးသွား၏။ ကျနော်ထွက်ပြေးရာကပင် အထူးနာမည်ကြီးလှသော ဓားမြ ဗိုလ်ယက္ခလက်အောက်သို့ ရောက်သွား၏။ ကျနော်မှာ ငယ်ရွယ်သူဖြစ်သည့်အပြင် လူသတ်ဝရမ်းပြေးတစ်ယောက်မို့ ဗိုလ်ယက္ခအနေဖြင့် အတော်ကလေးသဘောကျသွားပြီး ကျနော့်ကို သူကိုယ်တိုင် သေနတ်ပစ်သင်ပေးမည့်အကြောင်း ပြောပါသည်။ အံ့သြစရာကောင်းလှသည်မှာ ဗိုလ်ယက္ခတွင် မိန်းမနှစ်ယောက်ယူထားခြင်းဖြစ်ရာ၊ တစ်ဦးက အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးဖြစ်သလို တစ်ဦးကလည်း အသက်နှစ်ဆယ်ခန့်ကော်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ နှစ်ဦးစလုံးမှာ ရုပ်ချောကလေးတွေဖြစ်ရာ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ရောဘာမျှ အပြစ်ဆိုစရာတစ်ရွေးသာမျှမရှိပါ။
ယခုလို အချောအလှကလေးတွေမြင်ရသောအခါ ကျနော့်ရင်ထဲလှုပ်ရှားသွားသည်ကတော့ မှန်ပါသည်။ သို့တစေလည်း မိန်းမချောချောမြင်သောအခါဝယ် ကျနော်သည် မိန်းမမုန်းထားသူပီပီ အစောအကြောင်းကိုဆက်စပ်တွေးယင်းက သူ၏မိန်းမချောတွေကိုလ်း ကျနော်အင်မတန် မုန်းမိသည်။ ဒီကောင်မလေးတွေလည်း တနေ့နောက်မီးလင်းမဲ့ဟာလေးတွေပဲဟု ကျနော်ထင်မိပါသည်။ ကျနော့်ကို ဗိုလ်ယက္ခက သေနတ်ပစ်သင်ပေးရာတွင် ဆယ်ရက်အတွင်း ခြောက်လုံးပြူရော ရိုင်ဖယ်အပစ်ပါ ကျွမ်းကျင်ခဲ့လေ၏။ နောက်ဆုံတွင် ကျနော်မှာ ဗိုလ်ယက္ခ၏ လူယုံတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့၏။ သူသည် ကျနော့်ကို စိတ်ချယုံကြည်သည့်အတိုင်း တစ်ခါတစ်ရံ စခန်းတွင် အစောင့်ထားခဲ့သည်။
‘ရှင့်ကိုကြည့်ရတာ တမှိုင်မှိုင်နဲ့ မမတို့ဆီမှာနေရတာ မပျော်ဘူးလား’
အနှင်းမှာ ကျနော့်ထက် အများကြီးငယ်သည့်တိုင်အောင် သူ့ကိုယ်သူ မမဟု ခေါ်ခဲ့သည်ကြောင့် ကျနော်က သိပ်ပြီးရီချင်နေပါသည်။ ဒါးမြဗိုလ်ကတော်တစ်ဦးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အသက်ငယ်သော်လည်း လက်အောက်ငယ်သားတပည့်များက မမဟုတင်စားခေါ်ပါသည်။
‘အမလေး.. ရှင်ကလည်း စိတ်ကြီးပါဘဲလား’
‘လူတစ်ယောက်မှာ စိတ်တစ်ခုတော့ ရှိတာပေ့ါ’
‘ဟား.. ဟား.. ဟား.. သိပ်ရယ်စရာစကားပြောတဲ့လူဘဲ.. ရှင်ဘာလဲ.. ရီးစာပျက်လာလို့လား.. ဒါမှမဟုတ် မယားလင်ငယ်နေပြီး သူများနောက်လိုက်သွားလို့လား’
ထိုစကားကြားလိုက်သောအခါ ကျနော့်မှာ အနာပေါ်ဒုတ်ကျသွားသလို ဆတ်ဆတ်ခါ နာမိလေသည်။ ထို့ကြောင့် ဗြုံးကနဲ မတ်တပ်ရပ်ကာ အနှင်း၏ ပုခုံးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းကလေး ဆွဲကိုင်မိ၏။
‘ကျနော့်ကိုထပ်မံပြီး ဘုစကားပြောတာထက် ခင်ဗျားလင်တော်မောင် ငွေဘယ်လောက်.. ရွှေဘယ်လောက် ရလာမလဲ တွက်နေတာက ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်နှော’
‘ကျမဟာ ရွှေငွေမက်တဲ့ မိန်းမမဟုတ်သလို သူ့ကိုလည်း ချစ်လို့ယူရတာမဟုတ်ဘူး အတင်းဓားမြတိုက်ပြီး သိမ်းပိုက်ထားလို့ ယူနေရတာ’
‘ကဲ.. ဒါဆို ဘာပြုချင်သလဲ’ ခပ်ပြတ်ပြတ်ပင်မေးလိုက်၏။
အနှင်းက ရဲတင်းစွာပင် ကျနော့်လက်ကိုကိုင်ပြီး
‘ကျုပ်.. ဗိုလ်ယက္ခကို သစ္စာမဖောက်ဘူး’
‘ကျမ.. ရှင့်ကို မြင်မြင်ချင်းဘဲ အားကိုးတယ်.. ယုံကြည်မိတယ်.. ကျမကိုသာ ကယ်မယ်ဆိုရင် ရှင့်သဘောရှိပါ.. ရှင့်ကိုလဲ မြင်မြင်ချင်း ချစ်နေခဲ့မိတာဘဲ’
သူမသည် ကျနော့်ရင်ခွင်အတွင်း သူ့ကိုယ်လုံးကလေး ပစ်လှဲချလိုက်ပါသည်။ ကျနော့်စိတ်တွေမှာ ဒိန်းကနဲဖြစ်သွားရ၏။ မိန်းမတွေ ဖောက်ပြားမှုက လက်တွေ့တွေနေရချေပြီ။ ကျနော့်ချစ်ဇနီးအစောသည် ကျွန်တော်မရှိတုန်း နောက်မီးလင်းခဲ့သလို ဗိုလ်ယက္ခဇနီးချောကလေးမှာလည်း နောက်မီးလင်းရန် မြူဆွယ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်က သူမကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းတွန်းဖယ် ပစ်လိုက်သောအခါ သူမက နှုတ်ခမ်းကလေးစူလိုက်ကာ
‘ရှင်.. ကျမကို မချစ်ဘူးလား’
‘ငါ.. မင်းကို သနားတယ်.. ပြီးတော့ သစ္စာလည်း မဖောက်ချင်ဘူး’
‘ရှင်တော်တော်မိုက်တာဘဲ.. ဒီနေရာမျိုးဟာ လူပြတ်တဲ့နေရာ ဘယ်သူမှမရှိဘူး၊ ရှင့်ကို ကျမကချစ်နေတယ်.. ပြောင်ဘဲပြောတဲ့ဟာကို ငြင်းပယ်ရင် ရှင့်ဆရာကို ကျမက တနည်းနည်းနဲ့ ဂျောက်တွန်းရမှာဘဲ’
ကျနော်သည် ထောင်းကနဲ့ ဒေါသထွက်သွားပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူမပုခုံးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး
‘မင်းလဲ နောက်မီးလင်းချင်တဲ့ မိန်းမတစ်ယေက်ဘဲ.. ကဲ.. မင်းလိုချင်တာ ကာမဘဲမဟုတ်လား.. ရှင်းရှင်းပြောဟေ့ ကျုပ်က ရှင်းရှင်းဘဲကြိုက်တယ်’
ကျနော်က ထိုကဲ့သို့ မျက်လုံးမျက်ဆံပြူးမေးလိုက်သောအခါ အနှင်းမှာ မျက်နှာကလေးပေါ်တွင် သွေးခြေဥကလေး ပေါ်ထွက်လာကာ ရှက်သွားဟန်ရှိပါသည်။
‘ခုမှ ရှက်မနေပါနဲ့ကွာ.. ကဲ.. ကဲ.. ငါ့ကိုလည်း ဂျောက်မတွန်းနဲ့တော့.. မင်းအင်္ကျီတွေ ချွတ်စမ်း’
ဒီတစ်ခါတော့ အနှင်းမှာ ပိုမိုရှက်သွားဟန်တူပါသည်။ ကျနော်က ခပ်ချဉ်ချဉ်ရှိလေသောကြောင့် သူကလေူအား ခပ်ကြမ်းကြမ်းပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။
‘မင်းအခုမှ ရှက်နေသလား.. ငါ့ကို ချစ်တယ်ဆို ငါကလည်း ဘွင်းဘွင်းဘဲ.. ခပ်ရှင်းရှင်းဘဲ ချစ်ပြမယ်.. မင်းရဲ့ တကိုယ်လုံး အ၀တ်အစားတွေချွတ်ကွာ’
ကျနော်မှာ ခပ်စောစောကလို မဟုတ်တော့ဘဲ ယခုလို နီးနီးစပ်စပ်ရှေ့တော်ရောက်လာသူလေးအား လက်မလွှတ်ချင်တော့၍ ဆူဆူဖြိုးဖြိုးကိုယ်လုံးကလေးကို ဗြုံးကနဲ ဆွဲယူကာ သူကလေး၏ပါးရော လည်ပင်းပါ ဒလစပ်နမ်းလိုက်မိသည်။ ကျနော်၏ မြန်ဆန်မှုမှာ အံ့သြစရာ သူမ၏ယောက်ျားအကျီသဖွယ်ချုပ်ထားသော စစ်အင်္ကျီကျယ်သီးတွေကို ခပ်သွက်သွက်ကြီး ဖြုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ကျယ်သီးတွေ ပြုတ်သွားလျှင် အတွင်းမှ တင်းတင်းရင်းရင်း ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးနှင့် ဖွံဖြိုးကားပေါ်ထွက်နေသော အတွင်းခံဘော်လီအင်္ကျီအတွင်းမှ ရင်သားအနည်းငယ် ပေါ်ထွက်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ယခုအခါတွင် အနှင်းမှာ မြေပြင်ပေါ်တွင် ကိုယ်ကိုလှဲချလျက် ဘော်လီအင်္ကျီမှ တွယ်ထားလေသော ဂျိတ်ကြီးများကို သူမကိုယ်တိုင်က ရက်ရက်ရောရောနှင့် ဖြုတ်ချပစ်လိုက်ပါသည်။ ဘော်လီဂျိတ်ကလေး ပြုတ်သွားလျှင် ၀င်းဝင်းဝါ၀ါနှင့် တုန်တုန်လှုပ်လှုပ်ကလေး ရင်သားအစုံမှာ ကျနော့်နှလုံးကို ခုန်၍သွား၏။ ကျနော် သူမ၏ပါးမို့မို့ကလေးကို ကုန်း၍နမ်းလိုက်ပါသည်။ အနှင်းမှာ ကျနော်၏ ရင်ပတ်ကျယ်ကြီးအောက်တွင် ပြားပြားဝပ်နေပါသည်။ သူမ၏အလှဖူး ရင်သားထိပ်မှ နို့သီးလုံးကလေးတွေကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ယူနေရာကပ် ကျနော်၏လက်များမှာ သူမ၏အောက်ပိုင်းကို တရွေ့ရွေ့ ပွတ်သပ်နေမိရာ နှင်း၏ ဖြူဖွေးတုတ်ဖြိုးနေသော ပေါင်တံကြီးတွေက အလိုလိုပင် အပေါ်သို့ ထောင်ကားလာပါတော့သည်။
သူမ၏ ပိုးပျော့ထမီကလေးမှာလည်း လျှောကနဲနေအောင်ပင် မြေပြင်ဝယ် ပုံကျသွားလေတော့သည်။ ထိုအခါမှတော့ အအိုဟုသာ ဆိုလင့်ကစား ဖောင်းဖောင်းကြွကြွဖြိုးဖြိုးလှလှ အသားအစိုင်အခဲကလေးများမှာ သူ့နေရာနှင့်သူ အပြစ်ဆိုမရအောင် တည်ရှိနေသလို နှစ်သွယ်သော မျက်နှာသွယ်ကြားမှ စောက်ဖုတ်ကလေးသည် ဖူးပွင့်ကာ ခိုနားချင်စဖွယ်တည်ရှိနေ၏။
ကျနော်သည် အနှင်း၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ပွတ်သပ်ပေးယင်း နို့သီးကလေးကို စုပ်ယူနေရာမှ လျှာဖြင့်ထိုးကလိပေးလိုက်သည်။ အနှင်းမှာ တွန့်တွန့်သွားကာ ရင်ကိုကော့ပေးနေယင်းမှ
‘အဟင့်ဟင့်.. ယားတယ်.. အဟိ’
ကျနော်သည် အထက်ပိုင်းရှိ နှုတ်ခမ်း၊ လည်တိုင်၊ ရင်သား၊ ခါး၊ နောက်ကြောပြင်တို့ကို ပွတ်သပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကာမခလုတ်တို့ကို ဖွင့်လေသည်။
လက်တစ်ဖက်ကလည်း အနှင်း၏ အတွင်းသားတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ပေါင်ဂွဆုံရှိ ဖောင့်မို့မို့စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်သပ်လေရာ အနှင်းမှာ တဟင့်ဟင့် ကာမဆိပ်များ တကိုယ်လုံးသို့ ပျံ့နှံ့ကုန်၏။
အနှင်း၏ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကလေးမှ ပြူးထွက်နေသော စောက်စေ့ကလေးကို လက်ညှိုးနှင့် လက်မညှပ်ကာ အသာအယာဆွဲပေးသောအခါ အနှင်းမှာ တွန့်ကနဲဖြစ်သွား၍ စောက်စေ့ကလေးမှာလည်း မာတတ်တတ်နှင့် ချွန်တောင်မတ်လာလေသည်။
အနှင့်မှာ ကာမအဓိကသော့ချက် စောက်စေ့ကလေးကို သေချာစွာ ကလိခံနေရသောကြောင့် ခါးကလေးတွ့န်တွန့်ကာသွား၏။ ဖင်ကလေး မြှောက်မြှောက်ကာ သွား၏။ လျှပ်စစ်နှင့် တို့သလို ဖြတ်ဖြတ်လူးမျှ ခံစားနေရ၏။
‘အို.. ယားတယ်- အဟိ.. ကျမမနေနိုင်တော့ဘူး၊ စောက်ဖုတ်ထဲက သိပ်ယားလာပြီ- လုပ်ပါတော့- ဟင်းဟင်းဟင်း’
အနှင်းမှာ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ဖြစ်လာကာ ကျနော့်ကို တင်းကြပ်စွားဖက်ထားတော့၏။ အနှင်း၏စောက်ဖုတ်ကို ကိုင်၍ပွတ်သပ်ပေးနေသော ကျနော့လက်များကြောင့် ကာမစိတ်များ ထကြွလာကာ အနှင်း၏စောက်ဖုတ်မှ အရည်ကြည်တို့ စိုစိစိ ဖြစ်နေလေ၏။
ကျနော့အဖို့ သည်လိုအခြေအနေတွင် ပိုကောင်းသောကြောင့် အနှင်းကိုယ်လုံးကလေးကို မြေပေါ်တွင်လှဲလိုက်စေသည်။ အနှင်း၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဘေးသို့ကားလိုက်စေရာ ဖြူဖွေး၍ ဖောင်းဖောင်းအိနေသော စောက်ဖုတ်မှာ ဟပြဲကလေး ဖြစ်သွား၏။
စောက်စေ့ကလေးအောက်မှ စောက်ခေါင်းကလေးမှာ ခံချင်လာပြီး ပွစိပွစိဖြစ်နေလေသည်။ ကျနောသည် ၀တ်ထားသောပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်၏။
ထိုအခါ ကျနော့်လီးကြီးမှာ အနှင်း၏ စောက်ခေါင်းထဲတွင် ပျော်မြူးနေချင်ရှာသောကြောင့် တဆတ်ဆတ်နှင့် ခေါင်းညိမ့်နေရှာလေသည်။
ကျနော်သည် တဆတ်ဆတ်နှင့် မာ၍တောင်နေသော လီးကို လက်ဖြင့်ကိုင်၍ အနှင်း၏ပေါင်ကြားထဲသို့ ဆောင့်ညောင့်ဝင်ထိုင်ပြီး အနှင်း၏စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းကလေးကို အထက်အောက်ပွတ်တိုက်ပေးရာ အနှင်းမှာ ကိုယ်ကလေးတွန့်၍ ဖင်ကိုမြှောက်ပေးယင်း-
‘အကိုရယ် ကျမသိပ်ယားလွန်းလို့ လိုးမှာဖြင့် မြန်မြန်လိုးစမ်းပါ’
အနှင်းမှာ ရမ္မက်တံခိုးများတက်ကြွသောလေသံဖြင့် ကျနော့်ကို တစ်လုံချင်းပြောနေ၏။ ကျနော်သည် ရှုံ့လိုက် ကျယ်လိုက်ဖြစ်နေသော အနှင်းစောက်ဖုတ်အ၀ကို ကျနော့်လီးထိပ်နှင့် တေ့၍ အသာဖိချလိုက်ရာ အနှင်း၏စောက်ခေါင်းထဲသို့ လီးတစ်ချောင်းလုံး တင်းကြပ်စွာ ၀င်သွားတော့၏။
အနှင်းမှာ သူမစောက်ခေါင်းထဲဝင်စေချင်သော ကျနော့်လီးကြီး ၀င်သွားသောကြောင့် ကာမဆန္ဒပြည်ဝသွားလေသည်။ ကျနော်သည် လီးကို အနှင်းစောက်ဖုတ်ထဲသို့ အရင်းအထိ သိပ်သွင်းကာ ဖိကပ်ထား၏။ ထို့နောက် အသာပြန်ကြွ၍ တဖတ်ဖတ်နှင့် ကြွချီ ထိုးချီ လိုးနေလေတော့၏။
အနှင်းမှာ အောက်မှာ ဖင်လေးကို ကြွ၍ကြွ၍ အထက်သို့ မြှောက်မြှောက်ပေးကာ စကောဝိုင်းသလို ပြုလုပ်ပေးလေသည်။ ကျနော့်မှာ အနှင်း၏ အောက်ပေးကောင်းမှုကြောင့် အရသာတွေ့သွားသည်။ လီးဒစ်ကို စောက်ခေါင်းအနားထိရောက်အောင် ကြွ၍ခပ်ဆတ်ဆတ်နှင့် လေးလေးမှန်မှန်လိုးပေးနေတော့၏။
‘ကောင်းလိုက်တာရှင် အဲဒီလိုလိုးစမ်းပါ- သိပ်ကောင်းတာဘဲ- ကျမစောက်ဖုတ်လေး ကွဲရင် ကွဲသွားပါစေ’
အနှင်းသည် ကျနော့်ကို အားမလို အားမရနှင့် မြှောက်ပင့်ကော့ပေးနေ၏။ အနှင်း၏ စောက်ခေါင်းကြွက်သာတို့ ရှုံ့ရှုံ့ပေးပြီး စောက်ခေါင်းအတွင်းမှ စောက်မျှော့များက ကျနော့်လီးထိပ်နှင့် အချောင်းကို ဆွဲဆုပ်ထားမှုတို့ကြောင့် ကျနော့်မှာ အကြောအချဉ်များ တဆတ်ဆတ်တုန်အောင် ကာအအကြောများ ထွန့်ထွန့်လူးမျှ အရသာတွေ့ရသောကြောင့် ကျနော့်လိုးအားမှာ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ပြင်းသထက်ပြင်း သွက်သထက်သွက်လာ၏။
အနှင်း၏စောက်ဖုတ်၊ စောက်စေ့နေရာ၊ အချိုင့်အရှိုက်၏ ဖောင့်မို့သော နှုတ်ခမ်းသာတို့နှင့် ကျနော့်လီးအရင်းထက်နားမှ အသာပြင်တို့ ရိုက်ခတ်သံကြောင့် တဖတ်ဖတ် တဖောက်ဖောက် မြည်သံတို့မှာ ဆူညံနေ၏။
ကျနော်၏လီးကို အနှင်း၏စောက်ဖုတ်မှ ဆွဲအနှုတ်တွင် ပြွတ်ကနဲအသံကြားရသလို ပြန်၍ဆောင့်သွင်းလိုက်သောအခါ စွိ ဟု ထွက်လာပြန်သည်။ အမှတ်တမဲ့ဘေးမှ နားထောင်နေသူရှိပါက ထိုနေရာမှာပင် ထိုအသံနှင့် ယောက်ျားမိန်းမမရွေး ကာမအရေတို့ ထွက်ကျနိုင်ပေ၏။
အနှင်းမှာ ကျနော့်ပုခုံးကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်ကိုင်၍ ကော့၍ကော့၍ပေးနေလေ၏။ ထို့ကြောင့် စောက်ဖုတ်ကြွက်သားမှာ ရှုံ့ရှုံ့သွားရာ ကျနော်၏လီး ပြန်အသွင်းတွင် ကျပ်ကျပ်သွား၏။ ကျနော့မှာ ပို၍ပို၍ ကောင်းမွန်နေ၏။
ကာမဖီလင်များ တဖြည်းဖြည်းတက်လာသောကြောင့် နှစ်ဦးစလုံး ဖိန်းကနဲ ရှိန်းကနဲ ဖြစ်သွားကြကာ ကျနော့လီးမှ သုတ်ရည်များ အနှင်းစောက်ဖုတ်ထဲသို့ နွေးကနဲ တဆစ်ဆစ် ထွက်ကုန်လေသည်။
အနှင်းမှာ ကျနော့်ကိုယ်လုံးကို တအားဖက်၍ တွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားလေသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဖက်ထားသော လက်များ ပြေလျော့သွား၏။ ကျနော့်လီးမှ သုတ်ရည်များက အနှင်း၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ အပြင်သို့ ဖင်ကြားမှ စီးဆင်းကာ ပုဆိုးပေါ်သို့ စိုကုန်လေတော့သည်။
ကျနော်နှင့်အနှင်းသည် ချစ်အဏ္ဏ၀ါခရီးတွင် ကူးခတ်ကြသည်မှာ ဘယ်အထိကြာညောင်းသွားလေသည်မသိ။ အမှန်ကတော့ သူမအပေါ်ချစ်ရလေသော အချစ်က ကျနော့်အဖု့ အနှစ်မပါလေသော အသေချစ်၊ တဏှာချစ်သာလျှင်ဖြစ်၏။
အနှင်း၏ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်မှာ အစောထက်ပင်သာလှ၏။ အနှင်းက အစောလောက်ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် မဖွံ့ဖြိုးပေမဲ့ တင်ကြီးတွေက အစောထက်ပင် စွဲမက်စရာကောင်းနေပါသည်။
ထမီမရှိသော တင်ပါးနှင့်အတူ ဖြိုးဖြိုး မြမြ ကြွကြွရွရွလှပလေသည့် ပေါင်တံတွေနှင့် သွယ်ဖြာသွားလေသော ခြေသလုံးသားများက သူမ၏အလှသရုပ်ကို အင်မတန်မှ အထောက်အကူဖြစ်လေ၏။
တဖန်သူမ၏ မျက်လုံးမျက်ခုံး မျက်တောင်များအောက်မှ မျက်လုံးးများမှာ ပတ္တမြားလေးနှစ်လုံးပမာ တလက်လက်ဝင်းလက်လျက်ရှိ၏။
အပျိုတုံးကဆိုလျှင် ထိုမျက်လုံးအစုံမှာ အဘယ်မျှ ပိုမိုကြည့်ကောင်းမည်ကို မခန့်မှန်းနိုင်အောင်ဖြစ်ရ၏။ ယခုပ်င သူကလေး၏ မျက်လုံးအစုံမှာ အညှို့ဓာတ်အပြည့်နှင့်အတူ သူမ၏ တင်ပါးကြီးတွေကို မြှင့်ကာ မြှင့်ကာပေးလိုက်ယုံမက သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း ရမ္မက်ဇောပြင်းထန်ပြီး ကျနော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို တအားကုန်ငုံ၍စုပ်ယူလိုက်၏။
လည်ပင်းတွေကိုရော နားရွက်တွေကိုပါ မနာမကျင်ကိုက်လိုက်ပြီး တဟင့်ဟင့် ဖြစ်နေရှာ၏။ သူမသည် ကျနော်၏ကြောပြင်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် အသကုန်ဖက်ထား၏။ လက်တဖက်ကလည်း ကျနော်၏ခါးကို ထိုးလိုက်။ ရင်ပတ်ကျယ်ကြီးကို ဆွဲလိုက်နှင့် ရမ္မက်ဟုန်ကို ပြသလျှက်ရှိပါသည်။
ကျနော်နှင့် အနှင်းတို့မှာ ဘက်ညီညီ၊ ကျနော်ကလိုးလိုက်၊ ဆောင့်လိုက်တိုင်း သူမက အကော့၊ အပင့်၊ အမြှောက်တို့နှင့် ပေးနေသည်မို့ ကျနော်က ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဆောင့်ပြလိုက်ရာတွင် သူမမှာ ခါးကလေး ခွက်ဝင်သွားသည်အထိ အင့်ကနဲ အင့်ကနဲ အသံမြည်သွားသလို အပြုံးပွင့်တွေမှာလည်း ၀င့်ကာ ၀င့်ကာလာသည်ကို တွေ့ရ၏။
‘ရှင်ဟာ ကျမတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ယောက်ျားတွေထဲမှာတော့ စွဲမက်စရာပါဘဲရှင်’
‘ရှင်က ကျမကို မေ့သွားပြီပေ့ါလေ’
‘အို-ဘယ်မှာ မေ့နိုင်မှာလဲအနှင်း တကယ်ပါ- အနှင်းကို မမေ့ပါဘူး’
ကျနော်မှာ ယခုအခါ မိန်းမတွေသဘောကျအောင် ပြောဆိုတတ်သောအနေအထားကို ရောက်ခဲ့ပြီမို့ အရင်က မိန်းမတွေကို မုန်းလို့ ကင်းကင်းနေခဲ့သလောက် ယခုတော့ မိန်းမတွေကို ကိုယ်ကချော့နိုင်သလောက် သူတို့ကလေးတွေကို ကိုယ်ကလိုက်ပေးနိုင်သဘောက် ကိုယ့်အတွက် ဘဲရီးဂွတ်ပါလား ဟူသောအတွေးဖြင့် ဆေးဆောင်စရာမလိုသောအဖြစ်ကို ရောက်လာရပါတော့သည်။
အမြ- လစ်သွားသည်ဆိုလျှင်၊ ဗိုလ်ယက္ခ အပြင်ထွက်သွားသည်ဆိုလျှင် အနှင်းမှာ ကျနော့်ထံရောက်လာစမြဲဖြစ်ရာ တီတီတာတာ ပြောဆိုနေမြဲဖြစ်၏။ တစ်နေ့အထက်ပါအတိုင်း အနှင်းက ကျနော့်ကို ချိန်းတွေ့ပြောဆိုနေပြန်ပါသည်။
‘ကျမဆီ ညကျလာခဲ့ပါလား အကိုရယ်’
‘အမလေး.. မင်းလင်ကြီးနဲ့ မိနေရင် ငါ့ကို သတ်ပစ်ပါအုံးမယ်.. အနှင်းရယ်’
‘လာသာလာခဲ့ပါရှင်.. ဒီညမှာ ငနဲကြီးကို ကျမအရက်တိုက်ထားပါမယ့်.. မစိုးရိမ်ပါနဲ့’
ထိုသို့ အနှင်းက မျက်ခုံးကလေး ချိတ်ကာပြောဆိုလိုက်သောအခါ ကျနော့်မှာ သူကလေး၏အလိုကိုလိုက်လျောရပြီး လာခဲ့ပါမည်ဟု ၀န်ခံခဲ့ရပါသည်။
ဗိုလ်ယက္ခမှာ အိပ်ယာဝင်ခါနီးတွင် အရက်အနည်းငယ်သောက်၍ အိပ်တတ်ပါသည်။ ကျနော်က သူ့လိုမဟုတ်ပါ။ ဘယ်တော့မှ အိပ်ယာဝင်ခါနီးတွင် အရက်သေစာကို သောက်လေ့သောက်ထမရှိပါ။
ထိုညတွင် လက်အောင်ငယ်သားများနှင့် စကားပြောဆိုပြီးသောအခါ ကျနော်သည် အိမ်ကြီးဆီသို့ ပြန်လာခဲ့၏။ အိမ်ကြီးမှာ နှစ်ထပ်သစ်သားအိမ်ကြီးဖြစ်ကာ အခိုင်အခန့်ဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်၏။
ထို့အတွက် ကျနော်ဝင်ရောက်သွားသည့်အခါ အိမ်ကြီးမှာ အင်မတန်တိတ်ဆိတ်လှပြီး ရေနံဆီမီးတိုင် အလင်းရောင်ကလေးကသာ တလက်လက် မင်းမူနေပါသည်။
ကျနော်သည် ကိုယ့်အိပ်ခန်းသို့မသွားဘဲ ဗိုလ်ယက္ခရှိသော အပေါ်ထပ်သို့ ရဲရဲတင်းတင်းပင် တက်လာခဲ့ပါသည်။ အိမ်အပေါ်ထပ်ရောက်သောအခါဝယ် ဗိုလ်ယက္ခ၏ ဟဲဟဲဟဲ ဟူသော မိန်းကလေးနှစ်ဦးနှင့် ကျီဆယ်နေသံတွေကို ကြားနေရပါသည်။ ထိုအသံတွေကြောင့် ကျနော့်ရင်ထဲဝယ် လှိုက်ကနဲ တုံလှုပ်သွားသည်။
‘ဟဲဟဲ ဒါမှ ကိုကို့ရဲ့ မယားချောလေးကွ- ဟီးဟီး ဟောဒီအမြကလည်း ဘာတွေများ အလိုမကျသတုံး’
‘ဟင်း.. သူများကို ရွှေလက်ကောက် ကြီးကြီးဆင်ပေးပါဆို- အခုတော့ ကိုယ့်လက်အောက်က ဓမြဗိုလ်မယးတွေလောက်မှ မရှိဘူး- ဟင့်ဟင့်’
‘အမလေးကွာ- နောက်တစ်ခါ မိတ်ဆွေတွေလာတဲ့အခါမှ ရွှေလက်ကောက်ကြီးကြီးတစ်ရံ လုပ်လာခိုင်လိုက်ပါမယ်ကွာ’
‘အို စိတ်ချ- စိတ်ချ ရစေရမယ်’
‘ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုကို့ကို ချစ်နေရတာ’
ကျနော့်မှာ စောက်ကောင်မနှစ်ယောက်၏ ခရာတာတာအသံတေါကြားရတော့ အတော်ကလေး သောက်မြင်ကတ်လာပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ ချိန်းထားသည့်ဂတိအတိုင်း အနှင်းကို ချစ်ရမှာမို့ မင်းတို့ကလေးတွေတော့ တွေ့ကြအုံးမှာပေါ့ကွာ-
‘ဟာ ဒီနေ့အရက်သိပ်ကောင်းလှချီလား အချစ်ကလေးရဲ့’
‘ကောင်းတာပေါ့ကိုကို- ဒီအရက်ဟာ စပါယ်ရှယ်ချက်ထားတာဘဲ’
‘အေး-ဟေ့- ဒါကြောင့်မို့ အနှင်းက သိပ်လိမ်မာတာဘဲ- ဟဲဟဲ- ကဲကဲ မင်းလဲသောက်ရမယ်’
‘အို-ကိုကိုကလဲ- အနှင်းမှ မသောက်တတ်တာ’
ကျနော်သည် ထိုအသံတွေကြားရင်း ရင်ထဲတွင်း တဒိတ်ဒိတ်ဖြစ်နေမိပါ၏။ ထို့နောက် ဗိုလ်ယက္ခအရက်မူးသံကြီးကို ထပ်မံကြားရပါသည်။
‘ဟားဟားဟား- ဒီလိုမှပေ့ါ - အမြလဲသောက်ဟေ့- ဒီနေ့ညမူးမယ်- အားကြီးမူးမယ်’
‘အမလေး ရင်ထဲမှာ ပူလိုက်တာ’
တဖြည်းဖြည်းနှင့် သူတို့သုံးဦး၏အသံများ ငြိမ်သွားပါတော့သည်။
ကျနော်သည် ခြေသံကို ဖော့နင်းကာ တက်လာခဲ့ပါသည်။ မြင်ရသောမြင်ကွင်းမှာ အင်မတန်မှ မျက်လုံးပြူစရာပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဗိုလ်ယက္ခသည် အ၀တ်အစားဟူ၍ မရှိဘဲ အောက်ခြေလွတ်ကာ မှောက်ရက်ကြီး အိပ်နေသည်။
ကျနော့်ကိုချိန်းထားသည့် အနှင်းမှာလည်း ခါးတွင် ထမီမရှိတော့။ ဖြူဝင်းသောတင်ပါးသားတွေမှာ စွင့်စွင့်ကားကားပေါ်ထွက်ကာ တစောင်းကလေးအိပ်ပျော်လျက်ရှိပါသည်။ အမြင့်မှာမူ ပက်လက်ကလေးအိပ်ပျော်နေကာ သူမ၏ ပိုးထမီကလေးမှာ ဆီးစပ်အောက်နားသို့အထိ လျောကျနေသဖြင့် စိမ်းစိမ်းလဲ့လဲ့ တောအုပ်ပါးပါးလှပ်လှပ်လေးနှင့် ၀င်းဝင်းမှဲ့မှဲ့ မို့မို့မောက်မောက် စောက်ဖုတ်ကလေးတခြမ်းသည် မြင်းခွာသဏ္ဍာန်ပေါ်ထွက်နေရာ ဤနေရာသို့ အနှင်းစိတ်ကြောင့်လာခဲ့ရသော ကျနော်သည် အမြကလေး၏ဘက်သို့ တခဏချင်း စိတ်ရောက်သွားပါတော့၏။
ဤနေရာတွင် သူတို့အိပ်သောအိမ်ယာမှာ ခုတင်မဟုတ်ဘဲ သင်ဖြူးဖျာအချောကြီးတွေကို တခန်းလုံးအပြည့်ခင်းထားသည့်အပြင် မွှေ့ယာထူထူကြီးပေါ် ကတ္တီပါကော်ဇောကို ထပ်မံခင်းထားလေသောကြောင့် အဘယ်မျှဇိမ်ရှိသည်ကို သိသာလှပါ၏။
အနှင်းနှင့် အမြသည် အတူတူယှဉ်၍ အိပ်ချင်းမဟုတ်ဘဲ ဗိုလ်ယက္ခ၏ ၀ဲယာဘေးအိပ်ယာတွင် အိပ်နေခြင်းဖြစ်၏။
ထိုအခိုက် -အား- ဟူသောအသံနှင့် ဗိုလ်ယက္ခမှာ ပက်လက်ကြီးဖြစ်လာပြန်ကာ အနှင်းကိုယ်ကလေးကို လက်ကြီးဖြင့်ဖက်ကာ အိပ်နေလိုက်ပြန်ပါသည်။
ကျနော်မှာ ဗြုံးကနဲ ရေနံဆီလက်ဆွဲမီးအိမ် မီးစာကို လျှော့ချလိုက်ပြီး ၀ူးကနဲအသာမှုတ်လိုက်သောကြောင့် တခန်းလုံး မှောင်မဲကျသွားပါတော့၏။
ထိုအခါမှပင် အမြကိုယ်ကလေးနား ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ရှင်မီးဘော်လီအင်္ကျီကျယ်သီးလေးတွေကို စမ်းကာ ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါ၏။
ထို့နောက် ပွင့်ကန်ထွက်လာသော ၀ါဝါ၀င်းဝင်း ရင်သားအစုံးကို ငုံ၍စုပ်ပေးနေမိကာ၊ အမြတစ်ကိုယ်လုံးကို ပွတ်သပ်ရင်း ကစားနေမိပါသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် ကျနော်သည် အမြကိုယ်ကလေးဘေးသို့ အိပ်ချလိုက်ပြီး သူမ၏ထမီးကလေးကို တဖြည်းဖြည်းချင်း အောက်သို့ပေါင်ကလေးများမကာ ဆွဲချွတ်မိပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့တိုင်အောင် သူမမှာ လှုပ်ရှားမှုမရှိသေးဘဲ ရင်ကလေးခုန်သံမှာ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။
ကျနော်မှာ သူကလေး၏ ပါးမို့မို့ကလေးကို မွှေးရာမှတဖန် အားမလိုအားမရဖြစ်လာလျှက် သူကလေးဘေးမှထကာ သူမပေါင်ကလေးနှစ်လုံးကို ဗြိုးကနဲ မြှောက်လိုက်ပြီး ကျနော်၏ပေါင်နှစ်လုံးကြား ခွလိုက်ရာ အမြ၏ တင်ပါးကြီးတွေမှ မြှောက်တက်လာရပါတော့၏။
ထိုအခါ နဂိုကမှ ပြင်းထန်ထကြွနေပြီဖြစ်သော ကျနော့လီးကြီးမှာ စောက်ဖုတ်အတွင်းဝင်ရန် တေ့ထားပြီး လက်တစ်ဖက်က ၀ဲဘက်နို့ကို ဆုပ်ကိုင်လျက် နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ကာ မထိတထိစုပ်ပေးနေ၏။ ကျန်လက်တစ်ဖက်က ဆီးခုံကလေးပေါ် တရွရွပွတ်သပ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းအောက်သို့လျော၍ စောက်ဖုတ်အနီးရှိ ပေါင်တွင်းသားများကို ပွတ်သပ်ပေးပြန်သည်။
ထိုမှတဆင့် စောက်ဖုတ်မို့မို့လေးကို ပွတ်ပေးကာ နှုတ်ခမ်းချင်းလည်း တေ့စုပ်ထားသဖြင့် မရိုးမရွနှင့် တကိုယ်လုံး တတွန့်တွန့် လူးလာ၏။
စေ့ထားသော ပေါင်နှစ်လုံးကို ဘေးသို့ကားပေးရာ ကျနော်က လက်ညှိုးဖြင့်ကလိပေးရာ တောင်နေသောလီးဖြင့် အသာတေ့၍ ထောက်ထားလေသည်။ ထို့နောက် နှုတ်ခမ်းကို တအားစုပ်ယူ၍ ဆောင့်သွင်းလိုက်၏။ ပြစ်ရက်စရာမရှိသော အမြတကိုယ်လုံး ကျနော်၏ရင်ပတ်အောက်တွင် ပြားပြားဝပ်ကာ ပေါင်တံကြီးနှစ်လုံးကို စေ့လိုက်သော်လည်း ကျနော့်ဒူးခေါင်းနှစ်လုံး ထိုးသွင်းထားသဖြင့် မည်သို့မျှ မတတ်နိုင်ပဲ အစွမ်းကုန်ဖြစ်နေ၏။
ထို့နောက် စောက်ရည်ကြည်များရွှဲနေသော စောက်ဖုတ်ကလေးအ၀တွင် ကျနော့်လီးကို ဒစ်ဝင်အောင် အသာတေ့သွင်းထား၏။
အမြမှာ တစ်ချက်မျှတော့ကော့ပေးကာ ပေါင်တံနှစ်လုံးကို နဂိုကထက်ကားပေး၍ ကျနော့်ဘား အတင်းဖက်ထားသဖြင့် ဆိုင်းမနေတော့ အလိုးခိုင်းလိုက်ရာ အမြမှာ ကြီးမားသောလီးကြီ စောက်ဖုတ်ထဲ ၀င်လာသဖြင့် ကောင်းလည်းကောင်း နာလည်းနာဖြစ်ကာ တကိုယ်လုံး တွန့်တွန့်လူးနေတော့၏။ အမြသည် ကားပေးထားသော ပေါင်တံနှစ်လုံးကို ပြန်စေ့ကာ ကျနော့်ရင်ပတ်ကို ဆီးတွန်းထား၏။
စောက်ဖုတ်လေးမှာ ကျဉ်းသလောက် ကျနော့်လီးမှာလည်း ကြီးမားသဖြင့် အဆုံးထိဝင်သွားသောအခါ စောက်ဖတ်ုကလေးတစ်ခုလုံးကြွပြီး ကျပ်တစ်စို့နေသောကြောင့် ကျနော်သည် အတန်ကြာမညှောင့်သေးဘဲ သူမ၏မို့ဖောင်းအိညှက်သော နို့သီးကလေးနှစ်လုံးကို တစ်လုံးစီ ဘယ်ပြန်ညာပြန် စို့ပေး၏။ ထို့နောက် နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့၍ လျှာဖြင့်ကလိပေး၏။ အမြကလည်း လိုချင်တပ်မက်မောစွာ ညိမ်ခံနေ၏။
အတန်ကြာသောအခါ အမြသည် မျက်လုံးမှေး၍ လူးလွန့်လာပြန်သည်။ စေ့ထားသော ပေါင်နှစ်လုံးကိုလည်း စေ့လိုက်ကားလိုက်နှင့် တအင်းအင်းဖြစ်လာပြန်၏။ ထို့နောက် ကျနောသည် လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်အတွင်းမှ တဖြည်းဖြည်ဆွဲနှုတ်ကာ တ၀က်လောက်တွင်ရပ်ထားလျက် နို့ကို ခပ်နာနာဆုပ်နယ်ပြီး အဆုံးပြန်ထိုးလိုက်လေသည်။ အမြမှာ တချက်မျှ တွန့်၍ ကျနော့်ကြောပြင်ကို တအားဖက်ထား၏။
စောက်ရည်ကြည်များကလည်း တစိမ့်စိမ့်ထွက်နေရာ ကျနော့်သည် နို့သီးခေါင်းလေးနှင့် နို့အုံကလေးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် စို့ပေးယင်း အားနေသော လက်ချောင်းများက ဖွင့်ဖြိုးကားထွက်နေသည် အမြ၏ ဖင်ကြီးနှစ်လုံးကို ဆုတ်နယ်ပေး၏။ အမြ၏ပါးစပ်မှ တဟင်းဟင်းညီးတွားလာလေသည်။
ကျနော်သည် အမြပုခုံးနှစ်ဖက်ကို ချိုင်းအောက်မှ လျှိုသွင်းကာ လက်ဖြင့်ဖက်ထားလျက် အားရှိပါးရှိ ဆောင့်ဆောင့်လိုးလိုက်ရာ စောက်ရည်ကြည်များ တသွင်သွင်ထွက်လာကာ ဆယ့်လေးငါးချက် ဆက်တိုက်လိုးလိုက်ရာ အမြတစ်ကိုယ်လုံး ကော့ပြန်တက်လာပြီးလျှင် ကျွန်တော့နှုတ်ခမ်းကို အတင်းပင် စုပ်၍ုယူနေပါသည်။ ကျနော်ကလည်း အခွင့်ရခိုက် တအားစုပ်ယူပြီး အဆက်မပြတ် တအားထိုးလိုက်ရာ လီးကြီထဲမှ သုတ်ရည်များ ပန်းထွက်လာချိန်တွင် အမြလည်း ပြီးသွားသည့်အတွက် သုတ်ရည်များထွက်လာသောအခါ အမြအဖို့ နတ်ပြည်ရောက်သွားသည့်ပမာ အထူးဇိမ်ရှိကာ ကျနော့ကျောပြင်ကို သူမ၏လက်ချောင်းသွယ်သွယ်ကလေးများဖြင့် အသာအယာပွတ်သပ်ပေး၏။
‘အို- သွားစမ်းပါ- ရှင်ကျမကို မတရားလုပ်တာ တိုင်ပြောမယ်’
‘ကြည့်ပါလားလုိ့- ပြောလေကဲလေ သိပ်စိုးတာဘဲ’
အမြသည် ရှက်လေဟန်ဖြင့် မျက်နှာကို တဖက်သို့ လွှဲထားလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ပြုံးနေသောကြောင့် ကျနော်က မျက်နှာချင်းဆိုင်တေ့ဆိုင်ကာ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ပေးလိုက်ပါသည်။
လီးကြီးမှာလည်း ပျော့ခွေရာမှ နုပျိုစိုအိသော အထိအတွေ့ကြောင့် ပြန်မာလာပြီမို့ အမြပေါင်တံကြီးကို ကားထုတ်စေလိုက်ရာ ပေါင်ခြံအလယ်မှ စောက်ဖုတ်နှစ်ခြမ်း ဟသွားပါတော့သည်။
နီနီရဲရဲအတွင်းသားတွေပေါ်လာသော စောက်ခေါင်းကြီးမှာ ခပ်စောစောက လက်ကျန်ကာမအရည်တွေကြောင့် စိုရွှဲနေပါသည်။ ကျနော်က တင်းမာပြည့်ဖြိုးသော ပေါင်တံကြီးပေါ်ခွထိုင်ကာ ကုန်း၍ အမြ စောက်ဖုတ်အပေါ် မှောက်ချလိုက်တော့၏။
လက်ဖျားကလေးဖြင့် အမြနို့သီးတွေကို လှိမ့်ကာဆွပေးချိန်မှာ လက်များက ဖင်သားကြီးကာ ခါးသေးသေးကလေးကို ရစ်ပတ်တုတ်နှောင်နေပါသည်။ ကြီးမားတောင့်တင်းလှသော ပေါင်တံကြီးက ခပ်ဟဟရှိသော စောက်ဖုတ်ဝမှာ အံကျထောက်မိလေရာ အမြလက်များက အံကျတေ့သွင်းပေးပါသည်။
လီးတန်ကြီးဝင်သွားလေရာ ဒစ်ဖျားမြုပ်ယုံပင်ရှိသေး၏။ ယခုအချိန်တွင် ကျနော်က ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို နှိမ့်လိုက်ကြွလိုက်လုပ်ပေးရာ လီးထိပ်ဖျားမှာ စောက်ခေါင်းထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်လာပြီး အရည်တွေပိုစိမ့်လာသောအခါ လီးကြီးကို ပြွတ်ကနဲ ထိုးသွင်းလိုက်တော့သည်။
လီးကြီးက ပေါင်ကြားထဲရှိ စောက်ဖုတ်ထဲဝင်သွားပါတော့သည်။ အရှိန်ပြင်းသည်နှင့်အမျှ လီးအဆုံးထိဝင်းသွားလေရာ မို့အိနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကျနော့်လီးအရင်ရှိ ဆီးခုံပြင်က ဖတ်ကနဲ ရိုက်မိတော့၏။ ထိုအချိန်တွင် လီးချောင်းထိပ်က အမြ၏ ရသာဖူးဖြစ်သော စောက်စေ့ချွန်ချွန်ကလေးကို ပွတ်ဆွဲလိုက်သလို သားအိမ်ခေါင်းဝထဲသို့ စွတ်ကနဲ ဆိုက်ဝင်သွားလေရာ စုတ်တသပ်သပ်ဖြင့် အမြမှာ အီစိမ့်သွားတော့၏။
လီးကို ပြန်နှုတ်တော့လည်း အမြက တင်ပါးကြီးကို အားယူညစ်လေရာ လီးကြီးတစ်ခုလုံး ကျင်ကနဲ ကျင်ကနဲ လက်ဖြင့် ဆုပ်နယ်ပေးသလို ခံစားရပြီး ပြန်အဆောင့်မှာလည်း အကြောတွေတလှပ်လှပ် ဖြစ်စေ၏။ ထိုအတိုင်း အမြကျေနပ်အောင် ကျနော်အချက်ပေါင်မြောက်များစွာ ဆောင့်ပေးလေရာ မကြာမီပင် နှစ်ဦးစလုံး အရသာတွေ့သည်နှင့်အမျှ လက်ပန်းကျလာသည်။ တဟင်းဟင်း ဖြစ်လာကာ အမြ၏ ဖြူဝင်သော ကိုယ်ခန္ဓာကြီးမှာလည်း တဆတ်ဆတ် တုံလာတော့၏။
‘အမြ ကောင်းလားဟင်- အကိုတော့ ကောင်းလိုက်တာ’ အမြမှာ စကားမပြန်နိုင်သလို မျက်လုံးလည်း မဖွင့်နိုင်ရှာပေး။ ပုခုံးပေါ်တင်ထာသော ပေါင်ကြီးတွေကိုလည်း မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ပါ။ ရှေ့တိုးနောက်ငင် အားရပါးရဆောာင့်လိုးနေသော ကျနော့ကိုသာ အာရုံစိုက်ယင်း ပက်လက်အနေအထားမှ ကော့မြှောက်ပေးပါသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း မကြာမီနှစ်ယောက်စလုံး အရှိန်သွက်သွက်ဖြစ်ကာ တဖတ်ဖတ် တပြွတ်ပြွတ် ညံလျက်ကော့ကာ ကော့ကာ ချစ်တမ်းကစားလျက်ရှိကြတော့၏။ မြ၏ဖင်ကြီးမှာ အဆမတန်ကြီးမားခိုင်ခန့်ပြီး ကျနော့ဆောင့်လိုးချက်ကို နံရံသဖွယ် ကာဆီးခံထားနိုင်ပါသည်။ အမြခမြာ ကျနောဆောင့်လိုက်တိုင်း ဖင်ကြီးကို မြှောက်ကြွပေးနေရသဖြင့် မောလှပေသည်။ လီးကြီးကလည်း မပျော့မခွေ မာရှည်ရှည်ဖြစ်နေရာ စောက်ခေါင်းထဲမှာလည်း နာလည်းနာ ကြာလည်းကြာမို့ အရသာတွေ့နေပါသည်။
‘အကိုရယ်- သိပ်ထိတာဘဲကွာ- အိုကွယ် ဟင်း ဟင်း ဟင်း စောက်ခေါင်းထဲမှာ စိမ့်လိုက်တာ’
ကျနော်က ပြောဆိုနေသော အမြပေါင်တံတွေကို ပုခုံးတဖက်တချက်တွင် ထမ်းတင်လိုက်ပြီး အလိုက်သင့်ဟပြဲလာသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို မက်မောစွာ ကြည့်လိုက်ရာ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ကျနော့်လီးကြီး၏ ထိုးဆွမှုကို ခံနေရပါသည်။ ကျနော်သည် ခါးသေးသေးကို လှမ်းကိုင်ယင်း အားယူဆောင့်ချလိုက်ပါသည်။ ဒါတင်မဟုတ်သေးပါ။ ကျနော်က အမြနှုတ်ခမ်းအိအိလေးကို ဖိစုပ်ယူရာက လျာဖျားလေးဖြင့် အံကတေ့ဆက်ပေးလိုက်ရာ အမြမှ တကိုယ်လုံးတွန့်ယင်း-
‘အကိုရယ်- ဟင်း ဟင်း ဟင်း’
အမြမှာ သူမတစ်ကိုယ်လုံးကို စံနစ်ကျစွာ ဆွပေးနေသော ကျနော့ကို ဗြုန်းနဲဖက်ကာ နှုတ်ခမ်းချင်းပူးကပ်စုပ်ရင်းက ကျနော့်ကြောပြင်ရော ဖင်တွေပါမကျန် လက်ဝါးနုနုအိအိဖြင့် တယုတယ ပွတ်သပ်ပေးပါသည်။
ကာမကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်းထလာသော ကျနော်မှာ အမြစောက်ဖုတ်ထဲသို့ လီးထိုးသွင်းထည့်လိုက်ရာ ချောမွေ့လွယ်ကူစွာ ပြွတ်ကနဲပ ၀င်သွားတော့၏။
အမြကလည်း အားကျမခံပြန်ပြီး တင်ပါးကြီးကို မြှောက်ကော့ပေးလိုက်ပါ၏။
‘ဟင်းဟင်းဟင်း- အကိုရယ် ကောင်းလိုက်တာကွယ်’
ဒုတိယအချိအတွက် ပထမအကြိမ်ဆောင့်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း အမြမှာ လီးဝင်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် ဖင်ဆုံကြီကို အားရစွာ ကြွကာကော့ပေးယင်း ပြောလိုက်ချင်းဖြစ်၏။
ကျနောက လက်ရောပါးစပ် လျာများပါမကျန် အလုပ်ရှုပ်စွာ ဆွပေးယင်း အမြပေါ်မှာ မှောက်ယက်သား တင်းပါကို ဆွဲယူလျက် ဆောင့်ပေးပါတော့သည်။ အမြက ကျနော့ကို အားရပါးရဖက်ယင်းက ကျနော့်လီးအ၀င်ထွက်ကို ဂရုတစိုက်ကော့ပေးနေရာ အရသာရှိလာသည်မို့ မရပ်မနား ဆက်ဆောင့်နေတော့၏။ ဖင်ကြီးကော့ ပေါင်ကြီးတွေပါ ပုံမှန်မြှောက်မပေးနိုင်တော့ဘဲ အမြမှာ တကိုယ်လုံး နေရာအနှံ့အပြား စိတ်တွေတက်လာပြီး အကြောတွမလှုပ်ချင်အောင်ဖြစ်လာယင်း
‘အင်း.. ဟင်း… ပြီး ပြီးတော့မယ် အကိုရယ်’ အမြလည်း တကိုယ်လုံးတင်းနဲဖြစ်သွားယင်း ဓာတ်လိုက်သလို တချက်တည်း ကျင်ကနဲပြီးသွားသည်နှင့် တပြိုင်နက် ခြေပစ်လက်ပစ် ငြိမ်ကျသွားတော့ရာ ကျနော်လည်း ပေါင်ကြီးတွေကို ထမ်းထားရာမှ အမြစောက်ခေါင်းထဲသို့ လီးကြီးကို တအားပင် စိုက်သွင်းလိုက်ပါတော့သည်။
Posted by အမည်မသိစာအုပ် at 11:49